March | 2013 | Rev.U Min Lwin
ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်တဲ့ အာဗြဟံ
Posted by ဦးမင်းလွင် on 31/03/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ရွင္ျပန္ထေျမာက္, အီစတာ.	Leaveacomment
ဒီဗွီဒီယို ဇတ်လမ်းလေးကို ဟုတ်မှန်သောအလင်း မိသဟာရက မြန်မာ ဘာသာပြန်ပြီး တင်ဆက်ပေး ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂၂)မှာ ရှိတဲ့ အာဗြဟံရဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ အာဗြဟံကို ဘုရားသခင်က သားဖြစ်သူ ဣဇက်ကို ယဇ်ပူဇော်ရမယ် လို့ ပြောလိုက် တဲ့အခါ အာဗြဟံဟာ လုံးဝ မငြင်းဘဲ သားဖြစ်သူ ကို ယဇ်ပူဇော်လိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ ယဇ်ပူဇော်တာလဲ။ အာဗြဟံဟာ ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်တဲ့ အတွက်ကြောင့်သာ ယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင် ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာကို ရောမ ၄း၁၇ မှာ ဖေါ်ပြထား တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီဇတ်လမ်းလေးကို ကြည့်ပြီးတော့ ခွန်အားယူကြည့်ပါ။ ဇတ်လမ်းဟာ ၁၇ မိနစ်ကြာ ပါတယ်။ မြန်မာပြည် အင်တာနက် ကွန်နရှင်နဲ့ ကြည့်ဘို့ ခက်ခဲပေမဲ့ ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ ဇတ်လမ်းလေး ဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ဘို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
ငါသည်သင့်ကို လူမျိုးအများတို့၏ အဘဖြစ်စေ၏ ဟုကျမ်းစာ၌ လာသည် နှင့်အညီ၊ ထိုအာဗြဟံ သည်ကား၊ သေလွန်သော သူတို့ကို ရှင်စေတော် မူထသော၊ မဖြစ်သေးသော အရာတို့ကို ဖြစ်သော အရာကဲ့သို့ မှာထားတော်မူသော ဘုရားသခင် တည်းဟူသော၊ ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်သော ဘုရား ရှေ့တော်၌ ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏ အဘဖြစ်သတည်း။ (ရောမ ၄း၁၇)
ဒီဇတ်လမ်းကို ဒေါင်းလုပ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်ယူပါ။
ကြည့်လို့ အဆင်မပြေတာရှိရင် rev.uminlwin@gmail.com ကို အကြောင်းကြားပေးပါ။
ခရစ်ယာန် ယုံကြည်ခြင်း၏ သော့ချက်
Posted by ဦးမင်းလွင် on 29/03/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ရွင္ျပန္ထေျမာက္, အီစတာ.	3 Comments
အမင်္ဂလာကို မင်္ဂလာဖြစ်စေသော အီစတာအခါသမယ၌ ကျွန်ုပ်တို့ အားဖြင့် လူသား များစွာကို သင်္ခါရမှ ထာဝရသို့ မင်္ဂလာ ဖြစ်စေရန် ဘုရားသခင် ကောင်းချီး ပေးပါစေဟု ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သအပ်ပါသည်။
သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန် ယုံကြည်ခြင်း၏ သော့ချက် ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ၌ ယုံကြည်သူများသည် အလေး အနက်ပင် မထားကြတော့ပေ။ အချို့သော ဓမ္မဆရာကြီး များပင်လျှင် သခင်ယေရှု၏ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းကို သံသယ ရှိလာ ကြပါသည်။
ဤကား အံ့သြစရာ အသစ်အဆန်း မဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှုက မိမိ ထမြောက်မည့်အကြောင်းကို ပြောသောအခါ အနီးကပ် တပည့်တော်များက အလေးအနက်မထား၊ မယုံကြည် ကြသော်လည်း (မဿဲ ၂၀း၁၇-၁၉) သခင် ဘုရားကို ဆန့်ကျင်၍ အသေသတ်ခဲ့သော ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ ဖာရိရှဲများက သခင်ဘုရား၏ တပည့်တော်များထက် ထိုထမြောက်ခြင်းကို အလေးအနက် ထားပြီး ယုံကြည်ခဲ့ ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့ ရှင်ပြန် ထမြောက်မည်ဟူသော သခင်ဘုရား၏ စကားတော်ကြောင့် သခင်ဘုရား အသက်ရှင်စဉ်က ကြောက်ရွံ့သည်ထက် သခင်ဘုရား အသေခံတော် မူပြီးနောက် ပို၍ ကြောက်ရွံ့ကာ အလောင်းတော်ကို သင်္ချိုင်းထဲတွင် လုံလုံခြုံခြုံ ရှိစေရန် ပိုမို ဂရုစိုက်ကာ အစောင့် အကြပ်များ ထူထဲစွာ ချထားခြင်း စသည်ဖြင့် အဖက်ဖက်မှ ကြိုတင် ကာကွယ် ပြင်ဆင် ခဲ့ကြပါသည်။
ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ ဖာရိရှဲများ သဘော မပေါက်သော အချက် တစ်ချက်ကား မည်မျှ ကြီးမားသော ကျောက်တုံး၊ ရောမ အစိုးရ၏ တံဆိပ်တော်၊ ရောမ စစ်သားများ၏ စောင့်ကြပ်မှု စသည်တို့က ဘုရားသခင်၏ သားတော် သခင် ယေရှု၏ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းကို မဟန့်တားနိုင် ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ထမြောက်ပြီ ရန်သူများပေါ်ဘုန်းကြီး အောင်မြင်ပြီ နက်နဲရာထဲက အောင်မြင်လျက်တက်ကြွလာ
သန့်ရှင်းသူနှင့်စိုးစံ သက်ရှင်ထာဝရ ထမြောက်ပြီ ထမြောက်ပြီ ဟာလေလုယာ ထမြောက်ပြီ””
ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ယခုတိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ အောင်မြင်စွာ သီဆို နိုင်ခဲ့ကြ ပါသည်။
ထမြောက်ခြင်းဖြင့် ခံစားရသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ
သခင်ဘုရား၏ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အောက်ပါ အချက်များကို သိရှိစေရုံမက ယုံကြည် လိုက်နာခြင်း အားဖြင့် အကျိုးဆက် များကို ဆက်၍ ခံစားစေနိုင် ခဲ့ပါသည်။
သခင်ဘုရား၏ ပသခါ ညစာ စားပွဲသည် သခင်ဘုရား ကြွလာ သည့်တိုင်အောင် ပြုရသည့် ပွဲတော် မင်္ဂလာ အဖြစ်သို့ ပြောင်း သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
သင်တို့သည် ထိုမုန့်ကို စား၍ ထိုခွက်ကို သောက်သည့် အခါခါ သခင်ဘုရား အသေခံ တော်မူခြင်းကို ကြွလာတော် မမူမီ တိုင်အောင် ပြကြ၏ (၁ကော ၁၁း၂၆)။
သတ္တမနေ့ စည်းဝေးခြင်းမှ ပထမ နေ့စည်း ဝေးခြင်း
သတ္တမနေ့ စည်းဝေးခြင်းမှ ပထမ နေ့စည်း ဝေးခြင်းသို့ ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်သည်။
ခုနစ်ရက်တွင် ပထနေ့၌ မုန့်ကိုဖဲ့ခြင်းငှါ စည်းဝေးကြသောအခါ ပေါလုသည် နက်ဖြန်နေ့၌ ထွက်သွားမည် ဖြစ်၍ သန်းခေါင် တိုင်အောင် ဟောပြောလျက် နေလေ၏(တ ၂၀း၇)။
ဤကား ပညတ်တော်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း မဟုတ်၊ ပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းထဲ၌လည်း ပထမနေ့ကို ဥပုသ်နေ့၊ စည်းဝေးရာနေ့အဖြစ် ဖေါ်ပြထားခြင်းကို ဓမ္မ သစ်ခေတ်တွင် ပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမနေ့ ၌၎င်းင်း၊ ခုနစ်ရက် နေ့၌၎င်း၊ ဓမ္မ စည်းဝေးခြင်းကို ပြုရမည်။ ထိုနေ့ရက်၌ စားခြင်း ကိစ္စနှင့် ဆိုင်သော အလုပ် အဆောင်မှ တစ်ပါး အခြားသောအလုပ်ကို မလုပ်မဆောင်ရ။ (ထွက် ၁၂း၁၆)။
သင်တို့သည် သတ္တမလ၊ ပထမနေ့ရက် ၌ တံပိုးမှုတ်ပွဲ၊ ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကို ပြုရသော ဥပုသ်နေ့ကို စောင့်ရကြမည်။ လောကီ အလုပ်ကို မလုပ်ရ(၀တ် ၂၃း၂၄)။
ပဋိညာဉ် တရားဟောင်းမှ ပဋိညာဉ် တရားသစ်
ပဋိညာဉ် တရားဟောင်း (ပညတ်တရား)မှ ပဋိညာဉ် တရားသစ် (ကျေးဇူးတရား)သို့ ပြောင်းလဲပေး ခြင်းဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်၏ အသွေးတော် အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူး (ပဋိညာဉ် တရားသစ်)ကို ခံစားရခြင်း (၂ကော ၅း၁၇)။
ပညတ်တရား၏ ကျိန်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်း ခံရပြီး အာဗြဟံ ခံရသော ကောင်းချီး မင်္ဂလာကို ခံစားရသူများ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း (ဂလာ ၃း၁၃-၁၄)။
မောရှေ၏ တရားအတိုင်း မလွတ်နိုင်သော အပြစ် ရှိသမျှနှင့် လွတ်ခြင်း အခွင့်ကို ရရှိခြင်း (တ ၁၃း၃၉)။
ထိုရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းကို ကြီးသော တန်ခိုးနှင့် သက်သေခံခြင်း အားဖြင့် ကြီးသော ကျေးဇူးတော်နှင့် ပြည့်ဝခြင်းကို ခံစားရ ရှိခြင်း(တ ၄း၃၃)။
သေခြင်း တည်းဟူသော မာရ်နတ်၏ တန်ခိုးကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှါ ၎င်း၊ သေဘေးကို ကြောက်၍ တစ်သက်လုံး ကျွန်ခံရခြင်းမှ လွတ် မြောက်ခြင်း (ဟေဗြဲ ၂း၁၅)။
ထမြောက်ခြင်းသည် သတင်းကောင်း၏ အခြေခံအချက်
ခရစ်တော် ရှင်ပြန် ထမြောက်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ရှင်ပြန် ထမြောက် ကြမည်မှာ မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲပင် ဖြစ်သည်။ (ယော ၁၁း၂၅)။ သေခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သူ များအတွက် ခရီးဆုံး မဟုတ်သေးပါ။ ထာဝရ ကာလအတွက် ၀င်ခွင့် (ဗီဇာ)ပင် ဖြစ်သည်။
သခင် ခရစ်တော်ကို အသက် ပြန်ရှင် စေခဲ့သော တန်ခိုးတော်သည် အသင်းတော်က ကမ္ဘာ လောကကြီးအား သက်သေခံရသော အ ကောင်းဆုံးနှင့် အမွန်မြတ်ဆုံး သတင်းကောင်း၏ အခြေခံ အချက်ပင်ဖြစ်သည်။
ငါသည် ကိုယ်တိုင် ခံယူသည့်အတိုင်း သင်တို့အား ရှေးဦးစွာ အပ်ပေးသော အကြောင်းအရာ ဟူမူကား ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာ လာသည်အတိုင်း ငါတို့ အပြစ်ကြောင့် အသေခံ တော်မူ၏။ သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှ ကျမ်းစာလာသည့် အတိုင်း သုံးရက် မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက် တော်မူ၏ (၁ကော၁၅း၃-၄)။
သခင် ခရစ်တော်၏ အသေခံ တော်မူခြင်းသည် သာမန် သေခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဘယ်ပုဂ်္ဂိုလ်၊ ဘယ်လူသား ကမျှ မအောင်မြင်သော သေခြင်းမှ ထမြောက် ရှင်ပြန်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမင်္ဂလာမှ မင်္ဂလာ များစွာကို ဖြစ်စေ၍ ပြောင်းလဲမှု များစွာကို ဖြစ်စေသော သခင်အား အောက်မေ့ သတိရရုံမက ထိုသတင်းကောင်းကို ကြီးစွာသော တန်ခိုးနှင့် ဝေငှခြင်းအားဖြင့် ထာဝရ အသက်တာကို ရှာနေကြပြီး အချည်းနှီးအချိန်၊ ငွေ၊ စွမ်းအား များကို အကုန်ခံနေသည့် သူများ၊ ထို အချည်းနှီးသော အမှုများမှ လွတ်မြောက်၍ ထာဝရ အသက် ကောင်းချီး မင်္ဂလာကို ခံစားရရှိစေရန် အစွမ်းသတိ်္တရှိသမျှ၊ ဉဏ်ရှိသမျှ၊ ခွန်အား ရှိသမျှဖြင့် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ကြပါစို့..။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 27/03/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: နိမိတ္လကၡဏ, ေနမန္.	Leaveacomment
ရှုရိရှင်ဘုရင်၏ ဗိုလ်ချုပ်မင်း နေမန်သည် မိမိသခင်ထံမှာ မျက်နှာရသောသူ၊ ဘုန်းကြီးသောသူ ဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ရှိုရိပြည်သည် ထိုသူအားဖြင့် အောင်ရသော အခွင့်ကို ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူပြီ။ ထိုသူသည် ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် နူနာစွဲ၏။ ရှုရိလူတို့သည် အလို အလျောက်တပ်ဖွဲ့၍ ချီသွားစဉ်တွင်၊ ဣသရေလပြည်မှ ဘမ်းခဲ့သော မိန်းမငယ် တယောက်သည် နေမန်၏ မယားထံ၌ ကျွန်ခံရ၏။ ထိုကျွန်မကလည်း၊ ကျွန်မသခင်သည် ရှမာရိမြို့ ၌ရှိသော ပရောဖက်ထံသို့ ရောက်ပါစေသော။ ထိုပရောဖက်သည် သခင်၌စွဲသော နူနာကို ပျောက်စေလိမ့်မည်ဟု မိမိသခင်မအား ဆို၏။ နေမန်သည် မိမိအရှင်ထံသို့ဝင်၍ ဣသရေလအမျိုး မိန်းမငယ်စကားကို ပြန်လျှောက်၏။ ရှုရိ ရှင်ဘုရင်ကလည်း သွားလော့။ သွားလော့။ ဣသရေလ ရှင်ဘုရင်ထံသို့ စာပေးလိုက်မည်ဟု အမိန့်တော်အတိုင်း၊ နေမန်သည် ငွေအခွက်တရာ၊ ရွှေအခွက်ခြောက်ဆယ်၊ အဝတ်ဆယ်စုံကို ယူသွား၍၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင်ထံသို့ မိမိအရှင်၏ စာကိုသွင်းလေ၏။ စာ၌ပါသော အချက်ဟူမူကား၊ ကိုယ်တော်သည် ငါ့ကျွန်နေမန်၏ နူနာကို ပျောက်စေခြင်းငှာ သူ့ကိုဤစာနှင့်အတူ ငါစေလွှတ်သည်ဟု ပါသတည်း။ ဣသရေလ ရှင်ဘုရင်သည် ထိုစာကို ကြည့်ပြီးမှ မိမိအဝတ်ကို ဆုတ်၍ ငါသည် အသက်ပေးပိုင်၊ နှုတ်ပိုင်သောဘုရား ဖြစ်သောကြောင့် ဤသူသည် လူနူကို ချမ်းသာပေးစေခြင်းငှါ ငါ့ထံသို့ စေလွှတ် သလော။ ကြည့်ကြလော့။ ဤသူသည် ငါ့ကို အဘယ်မျှလောက် ရန်ရှာချင်သည်ကို ကြည့်ကြလော့ဟု ဆို၏။ ဣသရေလ ရှင်ဘုရင်သည် မိမိအဝတ်ကို ဆုတ်သည်ဟု ဘုရားသခင်၏လူ ဧလိရှဲသည် ကြားလျှင်၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်ကြောင့် အဝတ်ကို ဆုတ်သနည်း။ ထိုသူသည် ငါ့ထံသို့ လာပါလေစေ။ ဣသရေလပြည်၌ ပရောဖက် ရှိသည် ကိုသိလိမ့်မည်ဟု ရှင်ဘုရင်ကို မှာလိုက်လေ၏။ ထိုကြောင့်၊ နေမန်သည် မြင်းရထားကိုစီးသွား၍ ဧလိရှဲ အိမ်ရှေမှာ ရပ်နေ၏။ ဧလိရှဲက၊ သင်သည် သွား၍ ယော်ဒန်မြစ်၌ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင် ရေချိုးလော့။ အသားပြောင်း၍ သန့်ရှင်း လိမ့်မည်ဟု လူကိုစေလွှတ် ၍ပြောစေ၏။ နေမန် ကလည်း၊ အကယ်၍ ပရောဖက်သည် ထွက်လာမည်။ ငါ့အနားမှာ ရပ်လျက် မိမိဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ နာမကိုခေါ်၍ မိမိလက်နှင် သုံးသပ်သဖြင့် နူနာကို ပျောက် စေမည်ဟု ငါထင်၏။ ဒမာသက်ပြည်၌ အာဗနမြစ်၊ ဖာဖာမြစ် တို့သည် ဣသရေလမြစ် အလုံးစုံထက် သာ၍ ကောင်းသည်မဟုတ်လော။ ထိုမြစ်၌ ငါရေချိုး၍ မသန့်ရှင်း ရသလောဟု ဆိုလျက် အမျက်ထွက်၍ ပြန်သွား၏။ ကျွန်တို့သည် ချဉ်းလာ၍ အဘ၊ ခက်သောအမှုကို ပြုရမည်ဟု ပရောဖက်စီရင်လျှင် ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လော။ ရေချိုး၍သာ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်လော့ဟု စီရင်ရင်လျှင် အဘယ်မျှလောက် သာ၍ ပြုတော်မူ သင့်ပါသည် တကားဟု လျှောက်ကြသော်၊ နေမန်သည် သွား၍ ဘုရားသခင်၏လူ စီရင်သည်အတိုင်း၊ ယော်ဒန်မြစ်၌ ကိုယ်ကိုခုနစ်ကြိမ် နစ်သဖြင့်၊ သူ၏ အသားသည် သူငယ်၏ အသားကဲ့သို့ ပြောင်း၍ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်၏။ (၄ရာ ၅း၁-၁၄)
ကျမ်းစာထဲမှ ဓမ္မရာဇဝင် ဒုတိယစောင် ၅း၁ ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ယနေ့ နေမန်အကြောင်းကို တင်ပြ ဟောပြောလိုပါသည်။ သူသည် ယုံကြည်သူ တစ်ဦးတော့ မဟုတ်ပါ။ သူသည် သန့်ရှင်သော ယေရုရှလင်မြို့ တွင်နေထိုင်သူ မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့င် မည့်ကဲ့သို့ ဝိညာဉ်ရေးရာများကို ရယူ ခံစားနိုင် မည်ကို လုံးဝ မသိရှိပါချေ။ သူသည် ယုံကြည်ခြင်း တရား၏ အပြင်ဘက်က လူတစ်ဦးသာ ဖြစ်ချေတော့သည်။ ၄ရာ ၅း၁-၁၄ ကိုဖတ်ပါ။
နေမန်သည် စစ်သား လူကြမ်းကြီး တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏ အသက်တာတွင် ရှိနေသော ပြဿနာအတွက် အဖြေ မရှာတတ်ချေ။ ပြဿနာမှာ ပျောက်ရန် မဖြစ်နိုင်သော ရောဂါတစ်ခု ရှိနေပါသည်။ ထိုရောဂါမှာ နူနာရောဂါဖြစ်ပါသည်။ နူနာစွဲနေသော ရောဂါသည် တစ်ဦးသည် အနာဂတ် ဆိုသည်မှာ များများစားစား စဉ်းစားထား၍ မရနိုင်ပါချေ။ ထိုရောဂါမျိုးသည် ကိုယ်ခန္ဓာတွင် နာကျင်မှု တစ်စုံ တစ်ရာ ခံစားရခြင်း မရှိပါသော်လည်း အမြင်ပိုင်းနှင့် လူမှုရေးပိုင်းတွင် ကြီးမားသော အကျိုးဆက်များက နေရာယူ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိနေပါသည်။ လူနူတစ်ယောက်သည် မိမိကိုယ်တိုင်က အသိုင်းအဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှောင်ခွါ ထွက်ပြေး နေတတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူ၏ ခြေလက်တို့သည် အလို အလျောက် တစ်ဖြည်းဖြည်း အသွင်ပြောင်း၊ အရောင်ပြောင်း လာကာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်နှာ မပြရဲလောက်အောင်အထိ အရှက်တရားက ကြီးစိုး လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေမန်သည် ကြီးမားသော ပြဿနာကြီး တစ်ခု ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အလွန်ကြီးမားသော ထိုပြဿနာက နိမိတ်လက္ခဏာ တစ်ခု အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသည်။ ထိုအရာသည်သာလျှင် သူ၏ နောက်ဆုံးထွက်ပေါက် အဖြေဖြစ်နေသည်။ ဘုရားသခင်၏ အံ့သြဘွယ် နိမိတ်လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက် တူညီသော အခြေခံ အရင်းအမြစ်မှာ ပြဿနာဖြစ်သည်။ ပြဿနာ မရှိလျှင် အံ့သြဘွယ် နိမိတ် လက္ခဏာများ မဖြစ်နိုင်ပါ။ နေမန်၏ ဘဝ အသက်တာထဲတွင် ရှိနေသော ပြဿနာမှာ လက်ရှိအနေအထားတွင် အလွန် ကြီးမားသည် ပြောဆိုရပေမည်။ ယနေ့ သင့်အသက်တာထဲတွင် မည်မျှလောက် သော ပြဿနာများ ဖြစ်နေပါသလဲ။ သင့်မှာလည်း ပြဿနာရှိနေသည်။ ကျွန်တော့်မှာလည်း ပြဿနာရှိနေသည်။ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ အားလုံးတွင် ပြဿနာ ရှိနေသည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်တော် ပြောဆိုလိုသည်မှာ သင့်မှာ ပြဿနာ အမှန်တကယ် ရှိပြီဆိုလျှင် မကြာခင် သင်သည် နိမိတ်လက္ခဏာကို ခံစားရပေတော့မည်။
ကျမ်းစာထဲတွင် ရှိသမျှသော နိမိတ်လက္ခဏာများတွင် တူညီသည့် အခြေခံတစ်ခုမှာ ပြဿနာများဖြင့် အစပြုကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပေလိမ့်မည်။ သူတို့အားလုံးတွင် ပြဿနာ (သို့) လိုအပ်မှု တစ်ခုဖြင့် အစပြု ခဲ့ကြသည်။ ထိုအရာသည် ဘုရားသခင် စတင်လှုပ်ရှားနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အချက်ပြနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သင့်မှာ ပြဿနာ မရှိဘူးဆိုလျှင် ဘုရားသခင်ကို သင်လိုအပ်မည် မဟုတ်ပါ။
နမန်၏ အခြေအနေသည် ယခုအချိန်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်ထံမှ အကူအညီ တစ်စုံတစ်ရာကို မရရှိလျှင် သူတွင် ရှိသမျှ အားလုံး ဆုံးရှုံးသွားပေတော့မည်။ သူ၏ရာထူး၊ သူ၏ အနာဂတ်၊ သူ၏ မိတ်ဆွေ၊ သူ၏ မိသားစု၊ သူ၏ အနာဂတ် အားလုံး ကို ဆုံးရှုံးရပေတော့မည်။ သူသည် ထာဝရ အထီးကျန်မှုဖြင့် အသက်ရှင်ရပေတော့မည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် တစ်ခုခု လုပ်ရန် အရေးကြီးနေသည်။ ပထမဦးဆုံး သူလုပ်ခဲ့ရတာက သူ့ရဲ့ ပြဿနာကို နှုတ်ကနေ ထုပ်ဖော် ပြောဆိုရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သူ့ရဲ့ ပြဿနာကို အလင်းထဲမှာ ဆွဲထုပ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီအရာကို ပထမဦးစွာလေ့လာပါမယ်။
ပထမအဆင့် – ပြဿနာကို နှုတ်က ထုပ်ဖော်ဖွင့်ဟရခြင်း
ဤအဆင့်သည် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အတွက် အလွန် ခက်ခဲသော အဆင့်ဖြစ် ပါသည်။ အချို့ကိစ္စတွေများသည် ကျွန်တော်တို့၏ နှုတ်က မြွတ်ဟ ဘို့ရန် အလွန်ခက်ခဲသော အရာများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ထိုအရာများကို နှုတ်က မမြွတ် ဟချင်ကြချေ။ ကျွန်တော်တို့သည် ကူညီနိုင်သူ ကိုတော့ ပြောဆိုရ မည်ဖြစ်သည်။ နေမန်သည် အနည်းဆုံး သူ၏မိသားစုကို ထိုအကြောင်း ပြောခဲ့ရသည်။ ထိုမှတဆင့် သူကို ကူညီနိုင်မည့်သူကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ကျွန်တော်တို့၏ လက်ရှိ အခြေအနေ ပြဿနာများကို ဘုရားသခင်ထံ ပြောပြရန် လိုအပ်သည်။ နေမန်၏ မိသားစုက မည်သို့ မျှ မကူညီနိုင်။ ကူညီနိုင်မည့် လမ်းစတစ်ခု ကိုသာ မရေမရာ သိခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့တွင်မူကား ကူညီနိုင်သူကို သိရှိပြီး ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလော။ ဘု၇ားသခင်ထံ တိုက်ရိုက် တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကာ ထိုအရာများကို ပြောပြဘို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဒုတိယအဆင့်မှာ နိမိတ်လက္ခဏာ ခံစားရရန် ပြင်ဆင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယအဆင့် – တစ်စုံတစ်ရာကို လုပ်ဆောင်ဘို့ ဆန္ဒရှိရမည်။
နေမန်ကို ကြည့်ပါ။ သူ၏ အခြေအနေကို နှုတ်က ထုပ်ဖေါ်ဘို့သာမက တစ်စုံတစ်ရာကိုလည်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိနေပါသည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်မှသာ ဘုရားသခင်၏ နိမိတ်လက္ခဏာကို ရရှိ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပထမအချက်အနေဖြင့် အမျိုသမီးတစ်ဦးထံမှ အကြံညဏ်ကို ရယူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအရာပင်လျှင် နိမိတ် လက္ခဏာဖြစ်နေသည်။ အမျိုးသား တစ်ဦးသည် အမျိုးသမီး တစ်ဦးထံမှ စကားနားထောင်သည် ဆိုသည်မှာ အလွန်ထူးဆန်းနေသည် မဟုတ်ပါလား။ သူ၏ ဇနီးသည်ထံတွင် ဣသရေလ တိုင်းနိုင်ငံမှ ခေါ်ဆောင်လာသော ဘုရားသခင်အကြောင်း သိနားလည်သည့် ဂျူးမိန်းကလေး တစ်ဦး ရှိနေသည်။ သူမသည် ညဏ်ပညာရှိသော မိန်းကလေး တစ်ဦးဖြစ် နေသည်။ ထို့ကြောင့် မိန်းကလေးထံမှ အကြံညဏ်များကို နေ့စဉ် ရယူနေရသည်။ အမျိုးသား တစ်ယောက်အတွက် ထိုကဲ့သို့သော ခြေလှမ်းမျိုးသည် အလွန်ထူးခြားနေသည်။ အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများတွင် အမျိုးသား များကသာ ဦးဆောင်သော ခေတ်စနစ် ဖြစ်နေသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
နေမန်သည် မိန်းမငယ်ထံမှ စကားနားထောင်ရုံ သက်သက်မျှသာမဟုတ်။ အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်ဘို့ ဆန္ဒလည်း ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်ဘုရင်ထံ ထိုအကြောင်း အရာများကို စွန့်စားပြောဆိုရသည်။ ရှင်ဘုရင်က မည်သို့တုန့်ပြန်မည် ဆိုသည်ကို ကြိုတင် မခန့်မှန်းနိုင်။ သို့သော် ရှင်ဘုရင်က ကောင်းမွန်စွာ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ စာတစ်စောင် ရေးပေးလိုက်သည်။ ထိုစာကို ဣသရေလ ရှင်ဘုရင် လက်ခံရရှိ သော အခါ ရန်စသည်ဟု ထင်သည်။ ထိုရောဂါမျိုး ပျောက်ကင်းဘို့ အခြေအနေ မရှိခြင်းကို ရှင်ဘုရင်က ကောင်းစွာသိပါသည်။ ယခု ရောဂါပျောက်စေရန် စေလွှတ်လိုက်သည်ဟု ဆိုသော စာကြောင့် အမှန် တကယ် စစ်ပွဲ ဆင်နွဲရန် ရန်စသည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။
အထက်ပါ အခြေအနေများကို လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ပါက နေမန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသော အမှုများကို ဖြတ်သန်းရသည်။ လုံးဝအချိန်ဆွဲနေ၍ မရ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ပြဿနာ ပြေလည်ချင်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း သင်၏ ပြဿနာအတွက် အမြန်ဆောင်ရွက်ရမည့် အရာတွေ ရှိနေပါသည် အချိန်မဆွဲပါနှင့်။
ယနေ့ခေတ်တွင် လူအချို့သည် ပြဿနာ၏ အရင်းအမြစ်ကို ဖော်ထုပ်ရာတွင် အလွန်ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ ပြဿနာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်။ ပြဿနာကို ပြောဆိုကြသည်။ ပြဿနာကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ဟိုဘက်သည်ဘက် ပို့ဆောင်ကြသည်။ တချို့က ပြဿနာကို ပုံကြီးချဲ့ကြသည်။ သို့သော် ထို့ထက်ပိုမိုပြီး ဘာမှ ဖြစ်မလာခဲ့ကြချေ။ ရောဂါရှာဖွေသောသူများသည် ဆေးစာရွက် အတိုကလေး တစ်ရွက်ကို ရှည်လျှားစွာ ရောဂါ အခြေအနေကို ခန့်မှန်းပြောဆို တတ်ကြသည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် ရောဂါနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကျွမ်းကျင်သည်ဆိုပါက မည်သည့်ရောဂါဖြစ်နေသည် မည်သည့် ဆေးဖြင့် ကုသရမည်ကို တခါတည်း ပြောကြားနိုင်ကြသည်။
ဤနေရာတွင် နေမန်ထံမှ သင်္ခန်းစာ ယူစရာ အများအပြားရှိနေပါသည်။ ပြဿနာကို ပြေလည်ခြင်သောကြောင့် အားလုံးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထုံစံတွေကို လျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ ရှင်ဘုရင်ထံ စွန့်စား တင်ပြ ခဲ့ရသည်။ နောက်တစ်နိုင်ငံကို သွားရသည်။ ထိုနိုင်ငံ ရှင်ဘုရင်နှင့် အရဲစွန့်ကာ တွေ့ရသည်။ ထိုရှင်ဘုရင်က စိတ်ဆိုးပြီး တုန့်ပြန်မှုကို လည်း ခံစားရသည်။ နေမန်သည် ထိုအရာများကို ရဲဝန့်စွာ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းရသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် နိမိတ်လက္ခဏာ ခံစားချင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
တတိယအဆင့် – ယဇ်ပူဇော်ခြင်သော ဆန္ဒရှိရမည်။
နမန်သည် နိမိတ်လက္ခဏာခံစားနိုင်ရန် မိမိ၏ စည်းစိမ် ဥစ္စာကို ပေးလှူရန် အဆင်သင့် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့တွင် ရှိသော ဥစ္စာပစ္စည်း များကို ယူဆောင်ကာ ပေးလှူမှုပြုရန် ရောဂါ မပျောက်ခင်က တည်းက စဉ်းစားထားသည်။ ပြဿနာကို ပြေလည်ရန် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် ဥစ္စာများကို စွန့်လွတ်ရန်၊ ပေးလှူရန် အဆင်သင့် ရှိလေသည်။ ထို့ကြောင့် ရွေ၊ ငွေ နှင့် ဝတ်စုံ အကောင်းစားများကို သယ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ နေမန်၏ ပေးကမ်းချင်သော နှလုံးသားကြောင့် အိမ်ဖော် မလေး ကလည်း သူ့သခင်ကို စေတနာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် မမေးခင်ကပင် ပြောချင်နေသော သဘောရှိပေလိမ့်မည်။
သင်၏ အသက်တာမှာ နိမိတ်လက္ခဏာ ခံစားလိုလျှင် သင်သည် ယဇ်ပူဇော် ပေးလှူရန် ဆန္ဒရှိရမည်။ သင်သည် ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး နိမိတ် လက္ခဏာ ခံစားလိုပါသလား၊ ငွေကြေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး နိမိတ်လက္ခဏာ ခံစားလိုပါသလား။ သင်သည် မည်သည့် နေရာတွင် မဆို ထူးခြားသော နိမိတ် လက္ခဏာကို ခံစားလိုပါက နေမန်ကဲ့သို့ ပေးကမ်း လှူဒါန်ခြင်သော နှလုံးသား ရှိရန် လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
ခရစ်ဝင် ကျမ်းများတွင် ပေးခြင်သော နှလုံးသား ရှိသော လူငယ်လေးတစ်ဦးကြောင့် ခရစ်တော်သည် နိမိတ်လက္ခဏာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို သင်မလျော့ သင့်ပေ။ မုန့်(၅)လုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင်က နိမိတ် လက္ခဏာကို ဖြစ်စေသည်။ လူငါးထောင် စားလောက်အောင် ပွားများစေခဲ့သည်။
အာဗြဟံ၏ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းက နိမိတ်လက္ခဏာကို ဖြစ်စေသည်။ မိမိသားကိုပင်လျှင် ပေးလှူရန် လက်မတွန့်သော အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်၏ ချီးမြှောက်ခြင်းကို ကြီးမားစွာ ခံစားရသည်မဟုတ်ပါလော။ လူမျိုးကြီး အဖြစ် ချီးမြှောက်တော် မူခဲ့သည်။ ယနေ့တိုင် အာဗြဟံ၏ သားစဉ်မြေဆက်သည် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာကို ခံစားရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အာဗြဟံကိုယ်တိုင်က ပေးလှူရန် ဆန္ဒရှိနေသောကြောင့် သူ့ကို နိမိတ်လက္ခဏာများ ခံစားစေခဲ့သည်။
စတုတ္ထအဆင့် – နှလုံးသားကို ဖွင့်လှစ်ရမည်။
နေမာန်သည် သူ၏နှလုံးသားကို ဖွင့်လှစ်ထားသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ နိမိတ် လက္ခဏာ ခံစားဘို့ မည်သူကပင် ပြောသည်ဖြစ်စေ မာန မထားခဲ့ချေ။ ပြောဆို သမျှကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ခံယူချင်သူဖြစ်သည်။ ရှုရိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ယောက်အနေဖြင့် အိမ်ဖော် ကျွန်မလေး ပြောဆိုသော စကားကို နှလုံးသား ဖွင့်ကာ လက်ခံခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ လူနှင့် တွေ့သောအခါ သူ့ကို ထွက်မတွေ့။ ယော်ဒန်မြစ်တွင် ရေခုနှစ်ခါ နှစ်ရန် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အနေဖြင့် လက်မခံအောင် ဖြစ်ရသည်။ စိတ်တို ဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ သို့သော် မိမိ၏ကျွန်ဖြစ်သူက ချော့မော့ကာ ယော်ဒန်မြစ်တွင် ရေချိုးရန် ပြောသောအခါ ထပ်မံလိုက်လျောပြန်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖွင်လှစ်ထားသော နှလုံးသား ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မာန်မာနနှင့် အသက်မရှင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
နေမန်သည် နိမိတ်လက္ခဏာကို ခံစားပြီးသောအခါ သူ၏နှလုံးသားမှာ ဘုရားသခင်ကို အလွန်ကြည်ညိုသွားသည်။ ထို့ကြောင့် သူကိုယ်တိုင် အမှုထမ်း တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း ဘုရင်နောက်လိုက် ဖြစ်သောကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင် နေချင်သလို နေ၍ မရသော်လည်း ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခဲ့သည်။ အခြား ဘုရားတွေရဲ့ ရှေ့မှာ ကိုယ်ကို ညွှတ်ရခြင်းကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်တော်ကိုသာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပါမည် ဟု နှလုံးသားကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့လေသည်။
အထက်ပါ အဖြစ်အပျက်မှ သင်္ခန်းစာယူရန် မိတ်ဆွေကို တိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုပါသည်။ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်က ဘုရားသခင်ထံမှ ကြီးမားသော နိမိတ်လက္ခဏာကြီးကို ခံစားလိုပါလျှင် သင်ကိုယ်တိုင်က အထက်ပါ အချက် (၄)ချက်ကို သတိရ လိုက်နာသင့်ပါသည်။
၁။ ပြဿနာကို နှုတ်က ဖွင့်ဟပါ။
၂။ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချင်သော နှလုံးသားရှိပါ။
၃။ ပေးလှူချင်သော နှလုံးသားရှိပါ။
၄။ မာနတွေကို ဖယ်ရှားပြီး နှလုံးသားကို ဖွင့်လှစ်ပြီး အသက်ရှင်ပါ။
တစ်နပ်စာ နှင့် တစ်သက်စာ
Posted by ဦးမင်းလွင် on 25/03/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ယာကုတ္, ဧေသာ, ၾကြယ္ဝ.	Leaveacomment
ဤလောကတွင် လူများသည် တဦးကိုတစ်ဦး လိမ်လည် လှည့်ဖြား၍ ဆက်ဆံ ပြောဆို တတ်ကြသည် မှာ မဆန်းကျယ်လှပါ။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ လိမ်လည်၍ မုသာ စကားကို အသုံးပြုပြီး တစုံတစ်ခုကို ရယူသွားခဲ့သူများကို ပြန်လည် တွေ့ရှိရန် အလွန်ခဲယဉ်း လှပါသည်။ ထိုလူကို နောက်တစ်ဖန် ပြန်လည် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် မလွယ်ကူတော့ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော သူများကို မြန်မာစကားတွင် “တစ်နပ်စားကြံသည်” ဟု ခေါ်ပါသည်။
လောက လူသားများသည် ဇာတိလူများ ဖြစ်သောကြောင့် အချင်းချင်း ထိုကဲ့သို့ ဆက်ဆံသည်မှာ ပြဿနာ မရှိသော်လည်း ယုံကြည်သူ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဘုရားသခင်ကို ထိုကဲ့သို့သော အကျင့်စရိုက်များဖြင့် တစ်နပ်စားကြံကာ ဘုရားသခင်ကို မိတ်ဿဟာရ ဖွဲ့နေကြသည်မှာ အလွန်ပင် စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလှပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုးကွယ် ယုံကြည်သော ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့ တနပ်စား ကောင်းကြီး မင်္ဂလာမျိုးကို မပေးပါ။
ရှင်ယောဟန် ၁၀း ၁၀ (ခ) ပိုဒ်၌
“ ငါမူကား၊ သိုးတို့သည် အသက် လွတ်ရုံမျှမက အထူးသဖြင့် အသက်နှင့် ပြည့် စုံစေခြင်းငှါ လာသတည်း။”
ယေရှုခရစ်တော် ဤလောကသို့ ရောက်လာခြင်းသည် အသက်ပေး ဖို့ရန် သာမက အထူသဖြင့် အသက်နှင့် ပြည့်စုံစေရန် လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တသက်စာ ကြွယ်ဝခြင်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ပေးရန် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်မှာ ထင်ရှားလှပါသည်။ ကျမ်းစာထဲ၌ ခရစ်တော်သည် ကြွယ်ဝသော အသက်တာ (သို့) တသက်စာ ပေးရန်အတွက် လာသည်ကို အထပ်ထပ် ဖော်ပြထားပါသည်။
အခြားသော ကျမ်းပိုဒ် တစ်ပိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ရောမ ၈း၃၂
“ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ငါတို့အားမပေးဘဲ အဘယ်သို့ နေတော်မူမည်နည်း။ ”
“ခပ်သိမ်းသောအရာ” ဟုသုံးနှုန်းထားပါသည်။ ခပ်သိမ်းသော အရာဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ သင်၏ လိုအပ်နေသော အရာများဖြစ်သော ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမူရေးစသော သင်၏အခြေခံလိုအပ် ချက်များပင် ဖြစ်ပေမည်။ လူတဦးနှင့်တဦး လိုအပ်ချက်မတူညီပါ။ ထိုကြောင့် ကျမ်းစာ၌ ခပ်သိမ်းသောအရာဟု သုံးနှုန်း ထားရခြင်း ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ပြည့်စုံ၍ ကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရပေမည်။
ဖိလိပ္ပိ ၄း၁၉ ၌
“သင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကို ယေရှုခရစ်တော် အားဖြင့် ပြည့်စုံတော်မူလိမ့်မည်။ ”
ဤကျမ်းစာ၌ “အလိုရှိသမျှ” ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ လူတယောက်၏ အလိုရှိသမျှကို ယေရှုအား ဖြင့် ပြည့်စုံဖို့ ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း တနည်းအား ဖြင့်ကြွယ်ဝသော အသက်တာကို ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ပြင်ဆင် ထားသည်ကို ကျမ်းစာအားဖြင့် တွေ့ရ၊ မြင်ရ၊ ကြားရ ပါသော်လည်း ယနေ့ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများသည် တသက်စာ ပေးသော အရှင်ကို ယုံကြည် ဖက်တွယ်ရမည့် အစား တနပ်စာကိုသာ အားကိုးလျက်အသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းလိုကြသည်မှ ၀မ်းနည်း စရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ တနပ်စာနှင့် တသက်စာကို မခွဲခြားတတ်၍ အသက်တာ တလျှောက်လုံး ဘုရားနှင့် ဝေးခဲ့ရသော ဓမ္မဟောင်း ဘုရားလူများ ရှိခဲ့ကြကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ယနေ့ သင်ခန်းစာယူ၍ အသက်တာ၌ ပြင်ဆင် လျှောက်လှမ်း သွားနိုင်ရန် အနည်းငယ် ဖော်ပြလိုက် ပါသည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၅း၁၉-၃၄ ၌ ဧသောနှင့် ယာကုပ် ဆိုသော ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် အကြောင်းသည် ၀ိညာဉ်ရေးရာ၌ သင်ခန်းစာယူရန် အလွန်ကောင်းပေ၏။ ဧသောသည် သားဦး အရာကို ရထားပါသည်။ ထိုခေတ်ကာလ အချိန်က သားဦးများသည် ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးခြင်း ခံရသော သူများ ဖြစ်၍ ဘုရားသခင် ရွေးချယ်ထားသောသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အနေအထား မျိုးတွင် ဧသောသည် ကျေနပ် ဝါကြွားနိုင်သော အခွင့် ရှိသောသူ ဖြစ်သော်လည်း သူ၌ရှိသော ကြွယ်ဝ ပြည့်စုံသော အသက်တာကို အလေးမထားခဲ့ပါ။ တနေ့တွင် သားကောင် မရ၍ မောပန်းစွာ အိမ်သို့ ပြန်ရောက် လာသောအခါ မိမိ၏ညီငယ်အား စားစရာ ပေးပါဟု တောင်းခဲ့သည်။ အလွန် ဆာလောင် မောပန်း၍ ခန္ဓာ၌ အားကုန် နေခဲ့သည်။
ယနေ့ ယုံကြည်သူများလည်း လောက အရာများနှင့် နေ့စဉ် လုံးပန်းလျက်၊ ကျမ်းစာ ဖတ်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ မိတ်ဟာယဖွဲ့ခြင်း စသော ၀ိညာဉ်ရေးရာ၌ အားနည်းမှုများ ရှိနေကြ ကြသည်ကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။ နေ့စဉ်လုံးပန်း ရှာဖွေလျက်ရှိသော လောကအရာများက အသက်တာ၌ တဖြည်းဖြည်း နေရာယူလွှမ်းမိုးလာပြီး လောကီ ဆန်သော အသက်ရှင်မူများ၊ ပြောဆို နေထိုင်မူများ အားဖြင့် ဘုရားသခင်ဘက်၌ အားလျော့လာ ကြပါသည်။
ဧသောသည် ထိုကဲ့သို့ မောပန်း၍ ဆာလောင် နေသောအခါ ယာကုပ်သည် အခွင့်အရေးယူ၍ သားဦးအရာကို မိမိအား ပဲဟင်းတခွက်နှင့် ရောင်းချရန် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ဧသောက မစဉ်းစားတော့ဘဲ လွယ်လွယ် ကူကူ ပင် ရောင်းစားခဲ့ပါသည်။ ဘာကြောင့် ဧသောက လွယ်လွယ် ရောင်းစား၍ ယာကုပ်က ဘာကြောင့် သားဦးအရာကို အလွန်လိုချင်ခဲ့ပါသနည်း။ ဤမေးခွန်ကို သင်မေးဖူးပါသလား။ ဧသောသည် လောကအရာဆိုသော တနပ်စာကိုသာ ကြည့်မြင်၍ လတ်တလောအမှု ကိစ္စကိုသာ အာရုံထား၍ ဂရုစိုက်နေ သောကြောင့် မမြင်နိုင်သော ဘုရားသခင်၏ တသက်စာ ကောင်းကြီးများကို ဆုံးရှုံး သွားခဲ့ရပါသည်။ ယာကုပ်က မမြင်နိုင်သော ဘုရားသခင်၏ တသက် စာကောင်းကြီးများကို သူတွေ့မြင်၍ ရအောင်ယူ ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများ ၀ိညာဉ်မျက်စိများ ကန်းနေပါက ဧသောကဲ့သို့ တနပ်စားကိုသာ ရွေးချယ်မိ၍ အသက်တာ တလျှောက်လုံး ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် တွေ့ကြုံ နေရပါလိမ့်မည်။
မတည်မြဲသော ဤလောက အရာများကို မကြည့်မိရန် တမန်တော်ကြီး ရှင်ယောဟန်က ၁ယော ၂း၁၇ ၌ ဤလောကသည် မတည်မြဲကြောင့်၊ တခဏသာတည်၍ တနေ့မှာရွေ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်၊ကိုဖော်ပြထားပါသည်။ ရောမ ၉း၁၃ တွင် “ ဧသောကို ငါမုန်း၏ ” ဟုတွေ့ရပါသည်။ တနပ်စာကိုသာ ကြည့်၍ တသက်စာ ပေးနေသော ဘုရားသခင်ကို သင်မတွေ့မမြင်ခဲ့ပါလျှင် ဘုရားသခင်၏ အမုန်းဆိုသော ဆုံးရှုံးခြင်း ကိုသာ သင်ခံစား ရရှိပါလိမ့်မည်။ ထိုမျှမက ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့် ဝေးကွာသွားပါလိမ့်မည်။
အလားတူ အဖြစ်အပျက်နှင့် တူသော သမ္မာကျမ်းစာ လာအကြောင်းအရာ တခု ရှိပါသေးသည်။ ၃ရာ ၁၇း၁၂-၁၃ တွင် ဇရတ္တမြို့၌ ရှိသော မုဆိုးမ သားအမိ နှစ်ယောက် အကြောင်းဖြစ် ပါသည်။ အစားအသောက် ရှားပါး၍ အငတ်ဘေး ဆိုက်ရောက်သော ကာလအချိန် ဖြစ်၍ သားအမိ နှစ်ယောက်အတွက် လတ်တဆုပ်သာရှိသော ဂျုံမှုန့်နှင့် ဆီအနည်းငယ်သည် အစားခေါင်းပါးသော ကာလ တလျှောက်လုံး စား၍ လုံလောက်လျက် ရှိသည်မှာ အံ့သြစရာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသားအမိ နှစ်ယောက်တွင် အဘယ်ကြောင့် လက်တဆုပ်စာ မုန့်သည် မကုန်ပါသနည်း။ သင်ဆင်ခြင်မိပါသလား။ နှုတ်ကပတ် သမ္မာတရား စကားအတိုင်း ယုံကြည်ခြင်း မျက်စိဖြင့် ဘုရားသခင်အား ကိုးစားခဲ့ သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
လက်တဆုပ်စာသာ ရှိသော အရာလေးကို ဘုရားသခင်အား ကိုးစားခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ လက်တဆုပ်စာသာ ရှိသော အရာလေးကို ဘုရားသခင်အား ပေးပါဟု တောင်းသောအခါ လောက အတွေးအမြင်ဖြင့် စဉ်းစားခဲ့လျှင် မဖြစ်နိုင်သည့် အခြေအနေ ဖြစ်ယုံတင်မက ဒေါသပင်လျှင် ထွက်နိုင်ပါသည်။ ခက်ခဲရတဲ့ကြား ဘာလာရှုပ်တာလဲဟု ထင်မိမှာသာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုမုဆိုးမသည် ထို့ကဲ့သို့ မမြင်ဘဲ ဧလိယနှင့်အတူ ပါသော နှုတ်ကပတ်တော် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ၀ိညာဉ်မျက်စိဖြင့် ကြည့်၍ တနပ်စာ အခြေအနေမှ တသက်စာ ခံစားရသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ဖြစ်သွားခဲ့သည်မှာ အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် သင်နှင့် ကျွန်ုပ်အား တသက်စာ အတွက်ပေးနေသော အရှင် ယေရှုခရစ်တော်ကို ကိုးစား ခိုလှုံခြင်းဖြင့် တသက်စာဖြစ်သော တည်မြဲသော ကောင်းကင်အရာကို ရွေးယူနိုင်ဖို့ရန် တိုက်တွန်း ဝေငှလိုက်ရပါသည်။
ဘုရင်ယောသံ၏ အသက်တာကို လေ့လာခြင်း
Posted by ဦးမင်းလွင် on 17/03/2013
သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သော လူများစွာကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသူများသည် ဤလောကတွင် အမှန်တစ်ကယ် ရှိခဲ့သော နေရာများတွင် အမှန်တစ်ကယ် ရှိခဲ့သောလူ များဖြစ်ကြပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ ကဲ့သို့ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားကာ လုပ်ကိုင် နေကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။၊ ကျွန်တော်တို့ တစ်စုံ တစ်ရာကြောင့် ပျော်ရွင်နေသကဲ့သို့ ထိုသူများသည်လည်း ထိုနည်းတူပင် တွေ့ကြုံခံစားကြရသည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော် ထဲတွင် ယောသံဆိုသည့် ဘုရင်တစ်ဦး၏ အသက်ရှင်မှုအား လေ့လာကြမည် ဖြစ်သည်။ ဤသင်ခန်းစာကို ဖတ် နေသော စာဖတ်သူအများစုသည် ရှင်ဘုရင်များ မဟုတ် နိုင်သော်လည်း၊ ရှင်ဘုရင် ယောသံ၏ အသက် ရှင်မှုထဲမှ အသက်တာ အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သင်ခန်း စာရရှိနိုင်သည်။ ယောသံသည် ဣသရေလ လူမျိုးများ ဖောက်ပြန်ပြီး အခြားသော ရုပ်တုများကို ကိုးကွယ်နေသော ကာလ အတွင်း၌ ရှင်ဘုရင် ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ ဣသရေလ လူမျိုးများ သည် အသက်ရှင်သာ ဘုရားသခင်ကို စွန့်လွှတ်ကာ ပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံများမှ ရုပ်တု ထုလုပကိုးကွယ်ကြသော သူများ၏ အသက်ရှင်မှုများအတိုင်း အတုယူကာ အသက်ရှင်ခဲ့ကြသည်။ သင်၏ အသက်တာတွင် ထိုအဖြစ်မျိုးကဲ့ သို့သောအဖြစ်မျိုးကို တွေ့မြင် ခံစားဖူးပါသလား။ သင်၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိ သောလူများက အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်ကို မသိမြင်သေးဘဲ အခြားသောရုပ်တုများကို ကိုးကွယ်နေသည်ကို သင်တွေ့မြင် ပါသလား။ ထိုအဖြစ်ပျက် မျိုးသည် ယနေ့အဖြစ်ပျက်နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်း သည်မှာ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော များစွာ သောလူများ သည် စစ်မှန်သော၊ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ် သော တစ်ပါးတည်းသော ဘုရားသခင်ကို မသိ တော့ဘဲ များပြားလှသည့်အခြားသော အရာများ ကို ကိုးကွယ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
၆ရာ ၂၇း ၁-၆ ကိုဖတ်ပါ။
ယောသံသည် အသက် နှစ်ဆယ် ငါးနှစ်ရှိသော် နန်းထိုင်၍ ယေရုရှလင် မြို့၌ တဆယ့်ခြောက်နှစ် စိုးစံလေ၏။ မယ်တော်ကား ဇာဒုတ် သမီး ယေရုရှာ အမည်ရှိ၏။ ထိုမင်းသည် ခမည်းတော် သြဇိ ကျင့်သမျှအတိုင်း ထာဝရ ဘုရားရှေ့တော်၌ တရားသော အမှုကို ပြု၏။ သို့ရာတွင် ထာဝရ ဘုရား၏ ဗိမ္မာန်တော်ထဲသို့ မဝင်။ ပြည်သူ ပြည်သားတို့သည် မတရားသဖြင့် ပြုကြသေး၏။ ထိုမင်းသည် ဗိမ္မာန်တော် အထက် တံခါးကို လုပ်၍၊ သြဖေလ မြို့ရိုးကို အလွန် ခိုင်ခံစေ၏ ယုဒတောင်ရိုးပေါ်မှာ မြို့များကို၎င်း၊ တော၌ ရဲတိုက်များနှင့် ပြအိုးများကို၎င်း၊ တည်ထောင်လေ၏။ အမ္မာန် ရှင်ဘုရင်ကိုလည်း စစ်တိုက်၍ နိုင်သဖြင့် နိုင်သောနှစ်တွင် အမ္မုသားတို့သည် ငွေအခွက် တစ်ထောင်၊ ဂျုံကောရ တသောင်း၊ မုယော တစ်သောင်းကို ပေးရကြ၏။ ဒုတိယနှစ်နှင့် တတိယနှစ်တွင် ထို့အတူ ပေးရကြ၏။ ထိုသို့ ယောသံသည် မိမိဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားရှေ့တော်၌ မိမိအကျင့်တို့ကို ပြင်ဆင်သောကြောင့် တန်ခိုးပွားသတည်း။ (၆ရာ ၂၇း၁-၆)
အခန်းငယ် ၂ တွင် ယောသံ၏ အ ကြောင်းကို စာရေးသူကမည်သို့ ဖော်ပြထား သနည်း။
ယောသံသည် မိမိဖခင်သြဇိကျင့်သကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ တရားသောအမှုကိုပြု၏ ဟုဖော်ပြထားသည်။ ကောင်းပြီ၊ အခြားသော ရုပ်တု များကို ကိုးကွယ်နေသော လူများစွာထဲမှ ဘုရား သခင်ရှေ့တော်၌ တရားသောအမှုကိုပြုသော ထိုကဲ့ သို့သော မိသားစုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိဘေး ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော လူများ၏ အသက်ရှင်သည့် ပုံစံအတိုင်း အသက်မရှင်ဘဲ ဘုရားသခင်မှ ထိုသူတို့ အား ပြောထားသည့်အတိုင်း အသက်ရှင်လိုက် လျှောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရှေးကာလမှ ဘုရားသခင် သည် သူ၏လူမျိုးများအားပေးသော တရားတော် အတိုင်း လိုက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယောသံ သည်လည်း သူ၏အသက်တာတွင် ဖခင်အား စံပြ ထားကာအသက်ရှင်ခဲ့သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူသြဇိ သည်လည်း ထိုကဲ့သို့ပင် အသက်ရှင်ခဲ့သည်။
သင်၏ အသက်တာ၌ အသက်ရှင်သော ဖန်ဆင်း ရှင်ဘုရားသခင်၏ နောက်သို့လိုက်ရန်အ တွက် မည်သူတို့သည် သင်၏ စံပြပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြ သနည်း။
အားလုံးတွင် မိမိ၏မိသားစုများထဲမှ အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်အား နောက်လိုက်ရန် အတွက် မိမိ၏စံပြအဖြစ် ထားနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ် မျိုးရှိမည်မှာ မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ မိသားစုများ ပင်လျှင် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကို မသိသေး သောသူများပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် စံပြပုဂ္ဂိုလ် မရှိနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ မိသားစုများ အတွက်၊ သားသမီးများ အတွက်၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော လူများအ တွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦးဖြစ်ရန် ခေါ်တော်မူခြင်း ခံရသောသူ ဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အခြားသောလူများ အတွက် ခရစ်တော်၏ ပုံသက်သေကောင်းများ ဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာ အသွင်ပြောင်းလဲ စေရန် နှုတ်ကပတ်တော်အား ပြန်၍ ဖတ်ကြည့် ပါ။ ဣသရေလလူမျိုးများသည် ယောသံနှင့် သူ၏ဖခင်သြဇိအား စံပြထားကာ အသက်ရှင် ခဲ့ကြသလား။
သူတို့စံပြထားကာ အသက်မရှင်နိုင်ခဲ့ သည်မှာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်။ သူတို့ သည် အကျင့်ပျက်သောအရာများကိုသာ ဆက် ၍ လုပ်ဆောင် အသက်ရှင်နေသေးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဖတ်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်း ကျင်ကို ကြည့်လျှင် လူများစွာသည် ဘုရားသ ခင်မနှစ်သက်သည့် လမ်းများကိုသာ ဆက်၍ လိုက်ကာ အသက်ရှင်သည်ကို တွေ့မြင်ကာ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဘုရားသခင်အား သိမြင်ပြီး မိမိ၏ ကယ်တင်ရှင် သခင်အဖြစ် ယုံကြည် လက်ခံသကဲ့သို့ အခြားသော သူများ သည်လည်း ထိုနည်းတူ ရရှိခံစားနိုင်ရန် အတွက် ဘုရားသခင်သည် အလိုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ များစွာသော လူများသည် လမ်းမှား၌ ဆက်လျှောက်ကာ မှားယွင်းသည့် အကျင့်များနှင့် အသက်ရှင်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ထိုအရာများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း။ ဖိလိပ္ပိ ၂း၁၅ ကိုဖတ်၍ မည်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ရှင်ရမည်ကို ရေးချပါ။
– – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – -။ ရှင်ပေါလုက ဖိလိပ္ပိမြို့၌ရှိသော လူများ ထံသို့ စကြာဝဠာ၌ ထွန်းလင်းသောကြယ်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်ရန် ရေးသားခဲ့သည်။ အလွန်မှောင် မိုက်သော ညတစ်ညတွင် ရှင်းလင်းနေသော ကွင်းပြင်သို့သွားကာ ကောင်းကင်သို့မော့ကြည့် လိုက်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သည့်အရာကို တွေ့မြင် မည်နည်း။ ရေတွက်မရနိုင်အောင် များပြားလှ သည့် တောက်ပလင်းလက်နေသော ကြယ်များ ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်တစ်ခု လုံးသည် မဲမှောင်နေသော်လည်း၊ ညမှောင်နက် လေ၊ ကြယ်များ တောက်ပလင်းလက်လေ ဖြစ် သည်။ ”မဖြောင့်မမှန် ဖောက်ပြန်သောလူမျိုး” ဆိုသည်မှာ မမှန်သော ဘုရားများကို ကိုးကွယ်၍ မဖြောင့်မမှန်သော အကျင့်များဖြင့် အသက်ရှင် သော လူ မျိုးကြားတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်း ကင်၌လင်းလက်သော ကြယ်များကဲ့သို့ ဘုရား သင်၏ဘုန်းတော်ကို ကြားပြောရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ထိုအရာများကြောင့် စိတ်ပျက်ခြင်း မရှိဘဲ ဘုရားသခင်နှင့် ပို၍နီးကပ်စွာ အသက်ရှင်ခြင်း အားဖြင့် တောက်ပနေသောကြယ်ကဲ့သို့ အခြား သောသူများအား စစ်မှန်သော တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင်ကို ညွှန်ပြသောသူဖြစ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယောသံအသက်သာကို ပြန်၍ဆင်ခြင် ကြည့်ကြစို့။ သူ၏ အသက်ရှင်ခြင်းသည် ဣသရေ လလူမျိုးများနှင့် ကွာခြားမှုရှိပါသလား။ ၆ရာ ၂၇း၃-၅ သူသည် ဣသရေလ လူမျိုးများအား အုပ်စိုးစဉ် ကာလတွင် ပြောင်းလဲမှု များစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည် ဗိမာန်တော်၏ အချို့ အ စိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ပြု ပြင်ခဲ့သည်။ သူသည် နိုင်ငံတော်၏ အချို့သောနေရာများ တွင် မြို့များကို တည်ခဲ့သည်။ သူ၏ရန်သူ အာမ္မုန်လူမျိုးများ ကိုလည်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး သူ့အား အာမ္မုန် လူမျိုးများက များစွာသော ဘဏ္ဍာငွေကို ပေးဆောင် ရသည်။ ထိုသို့သော ခြားနားသည့် အဖြစ်အပျက် များကို ဆိုးရွားလှသည့် ကမ္ဘာမြေကြီးတွင် မည်သို့ သူ စီမံခဲ့သ နည်း။ ၆ရာ ၂၇း၆
” သူသည် သူ၏ဘုရားသခင် ရှေ့တော်သို့ မပြတ်သောခြေလှမ်းဖြင့် လျှောက်လှမ်းခဲ့သည်”။ သူ၏အသက်ရှင်သည့် နေ့ရက်တိုင်းတွင် ဘုရား သခင်ရှေ့တော်၌ သစ္စာရှိစွာ လျှောက်လှမ်းခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တစ်ကြိမ်တစ်လေမျှ ဘုရားသခင် ၏နောက်သို့ လိုက်သည့်အမှုတွင် ပျက်ကွက်သွား ခြင်း၊ ကောင်းစားသည့်အချိန်၌သာ နောက်လိုက် ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပေ။ မပြတ်သောခြေလှမ်းဆိုသည် မှာ အစဉ်အမြဲ(သို့) အမြဲတမ်းဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ် သည်။ မည်သည့်အခြေနေမျိုးဖြစ်နေပါစေ၊ ဘုရား သခင်နှင့်နီးကပ်စွာ အသက်ရှင်သောသူ ဖြစ်သည်။ သူ၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော လူအားလုံး ဘုရားသခင်၏နောက်သို့ မလိုက်သော်လည်း သူသည် ဘုရားသခင်အား ဆက်လက်၍ ဖူးမြှော် ကာ၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်း ဆက်၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေကြီး၌ ဖြစ်ပျက်နေ သောအရာများကို ကြည့်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းအား ဖြင့် ဘုရားသခင်ကိုသာ ရှာဖွေကြည့်မျှော် ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဘုရားသခင်က သူ့အား အမှောင် ကမ္ဘာ၏ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ့အား အလွန်အား ကြီးသော ရှင်ဘုရင်တစ်ဦးအဖြစ် သူ၏ ပတ်ဝန်း ကျင်နိုင်ငံအလယ်တွင် ကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်။ သင်ဘုရာသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းခြင်း၊ အသက်ရှင်းခြင်းကို ဆင်ခြင်ရန် အချိန်ခဏတာ ယူလိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ မပြတ်သော ခြေလှမ်းများဖြင့် သင်လျှောက်လှမ်းနေပါ သလား (သို့) သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော လူများ၏ အသက်ရှင်သော နည်းလမ်းများက သင့်အား လွယ်ကူစွာ စိတ်အနှောက် အယှက်ဖြစ်စေ ပါသလား ဘုရားသခင်၌ အာရုံပြုကာ ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ မပြတ်သော ခြေလှမ်းများဖြင့် လျှောက် လှမ်းပြီး စကြာဝဠာကြီးထဲ၌ လင်းလက်သော ကြယ်ကဲ့သို့ ဆက်လက် လင်းလက်နေပါစေ။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 11/03/2013
Posted in: Video.	Tagged: ႏိုးထမႈ ဧဝံေဂလိ.	Leaveacomment
ဒီဗွီဒီယို ဇတ်လမ်းလေးကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ “ဟုတ်မှန်သောအလင်း မိတ်သဟာရ” အဖွဲ့က ဘာသာပြန်ဆိုကာ မြန်မာမှုပြု အသံသွင်းထားတဲ့ ဇတ်လမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံက အဗ္ဗဒူ ဆိုတဲ့ ကောင်းလေး တစ်ယောက်ဟာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ လမ်းလျှောက်လာတုန်း ခရစ်ယာန် သာသနာပြု ဆရာ တစ်ဦးနဲ့ တွေ့ပြီး ကျမ်းစာအုပ် တစ်အုပ် လက်ဆောင် ရလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ခရစ်တော်ကို လက်ခံခဲ့လို့ အိမ်က နှင်ချခံလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတော်ကြာတဲ့အခါ ဘုရားသခင်က အဲဒီရွာကို ပြန်သွားပြီး ခရစ်တော် အကြောင်း ပြောဘို့ စေခိုင်းခံခဲ့ရတယ်။ အိမ်သားတွေက လက်မခံလို့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ထံမှာ နေရင်း အဲဒီ သူငယ်ချင်းကို သက်သေခံရာကနေ အဲဒီ သူငယ်ချင်းက ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အဲဒါကို သူငယ်ချင်းရဲ့ မိသားစုနဲ့ ရွာသားတွေ သိသွားပြီး သူ့ကို ကြိုးနဲ့ချည် ရိုက်နှက်ကာ ရွာပြင်ကို နှင်ထုပ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ သူငယ်ချင်းက လာရောက်ကယ်တင်ပြီး နှစ်ခြင်း ပေးဘို့ တောင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် အဲဒီ နှစ်ယောက်အားဖြင့် အဲဒီရွာမှာ နိုးထမှုကြီး ဖြစ်လာတော့တယ်။
အခုဆိုရင် သူ့ကို ရိုက်ခဲ့တဲ့ ရွာသားတွေဟာ ပြောင်းလဲ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် အဲဒီ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ လူပေါင်း ၂၈၀၀၀၀ (နှစ်သိန်း ရှစ်သောင်း) ကျော်ဟာ ပြောင်းလဲလာခဲ့ကြပြီး အသင်းတော်တွေလည်း ပွားများလာပါတော့တယ်။
အဲဒီ နိုးထမှုရဲ့ ဇတ်မြစ်ကို လေ့လာပြီး ကျွန်တော်တုိ့လည်း အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက် ဧဝံဂေလိ သတင်းစကားကို ဟောပြော၍ နိုးထမှုကို မျှော်လင့်ကြပါစို့
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဗွီဒီယိုကို ကြည့်ရန် အခက်အခဲ ရှိပါက အောက်ပါ လင့်တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဧ၀ံဂေလိ သတင်းကောင်း၏ အကျိုးဆက်များ by minlwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 09/03/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ေၾကကြဲ တြင္း ေယာသပ္.	2 Comments
ကြည့်လော့ အိပ်မက်ဆရာ လာပြီ။ ကိုင်ကြ။ သူ့ကို သတ်၍ တစ်စုံတစ်ခုသော တွင်းထဲသို့ ချပစ်ကြစို့။ (ကမ္ဘာဦး ၃၇း၁၉-၂၀)
ထိုအခါ ယေရမိကို ယူ၍ ထောင်ဝင်းထဲမှာ ရှိသော သားတော် မာလခိ၏ မြေတွင်း၌ ကြိုးနှင့် လျော့ချကြ၏။ (ယေရမိ ၃၈း၆)
ကျွန်တော်တို့ ယောသပ် အကြောင်းကို ကျမ်းစာတွင် ဖတ်ကြည့်လျှင် အောက်ပါ အချက်များသည် မငြင်းနိုင်သော အချက်များ အဖြစ် မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ယောသပ်ကို ဘုရားသခင်က ရွေးချယ်ထားသည်။
ယောသပ်ကို ဘုရားသခင်က ဘိဿိပ်ပေးထားသည်။
ယောသပ်ကို ဘုရားသခင်က ထူးခြားမှုတွေကို ခံစားစေသည်။
ယောသပ်ကို ဘုရားသခင်က မျက်နှာသာ ပေးခဲ့သည်။
ယောသပ်ကို ယောသပ်သည် ဖခင်ဖြစ်သူ ယာကုတ်က အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသည်။
ယောသပ်၏ အသက်တာတွင် ဘုရားသခင် အတူပါရှိသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော စံနှုံးများကို ကြည့်ပြီး ယောသပ်၏ အသက်တာတွင် အောင်မြင်မှုများ ရရှိနေသယောင် ခံစား ရပေလိမ့်မည်။ အထက်ပါ စာကြောင်း များကို ကြည့်ပြီး မိမိ အသက်တာနှင့် နှိုင်းယှဉ် ကြည့်လိုက် သောအခါ ယောသပ်ကို မနာလိုသော အသက်တာပင် ဖြစ်မိပါသည်။ (အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ သင်ထင်ရပါသနည်း) ယောသပ်၏ အသက်တာတွင် အောင်မြင် မှုများနှင့် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာမှုများသာ ခံစားနေရ သယောင် ထင်မြင် နေကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ကျွန်တော်တို့သည် ကျမ်းစာကို ဖတ်လိုက် သောအခါ တွေ့မြင် ရသော ယောသပ်၏ အသက်တာသည် နာမည်တူမျှသာ ဖြစ်နေမည် လားဟူ၍ပင် ထင်မှတ် ရပေလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ယောသပ်၏ အသက်တာတွင် စိန်ခေါ်မှုများ၊ စွန့်စားရသည့် အရာများ၊ ဝမ်းနည်းမှုများ ပြည့်နှက်နေသည့် အသက်တာ မျိုးကိုသာ မြင်တွေ့ ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
တွင်းထဲသို့ ရောက်နေသော ယောသပ်
တစ်နေ့တွင် သူ့ကို တွင်းထဲတွင် တွေ့ရလေသည်။
ဒီနေရာလေး မှာတင် ရပ်ပြီး ဒီအကြောင်းကို ဆင်ခြင် ကြည့်ကြပါစို့။ ယနေ့ တစ်ချို့သောသူများ ယုံကြည် ဟောပြောနေကြ သည်မှာ
“သင်ဟာ ခရစ်ယာန် တစ်ဦး ဖြစ်တာကြောင့် မည့်သည့် ဒုက္ခ ပြဿနာမျှ မရှိနိုင်ပါ”
“အသက်ရှင်သော ဘုရားကို သိကျွမ်းတာကြောင့် မည်သည့် ဖျားနာမှုမျှ မရှိနိုင်”
“ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်” “ပြဿနာများ ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်” အစရှိသဖြင့် ပြောဆိုလျက်ရှိပြီး၊ ထိုပြောဆိုမှုများကို ခွန်အားယူ တည်ဆောက် နေကြသူများလည်း တွေ့နေရပါသည်။ (ထိုသို့ သင့်ကို လာရောက်ပြော ဆိုခဲ့ပါလျှင်၊ ထိုသူတို့သည် လိမ်လည်နေ သူများ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူလိုက်ပါ။)
“ဖြောင့်မက်သောသူသည် များစွာသော ဒုက္ခဆင်းရဲကို ခံရသော်လည်း၊ ထာဝရ ဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ဆင်းရဲထဲက ကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ (ဆာလံ ၃၄း၁၉)
ကျွန်တော် ပြောလိုသော အချက်မှာ “ခရစ်ယာန် တို့တွင် ဒုက္ခပြဿနာ များစွာ ရှိပါလိမ့်မည်” ဟူသော အချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန် များလည်း ဖျားနာနိုင်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်များတွင် အကြွေး ရှိနိုင်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်များတွင် အိမ်ရာမဲ့ အများအပြား လည်း ရှိနေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် သင့်အသက်တာလည်း ကျဆင်းနိုင်ပါသည်။ ဖိအားများ ရှိနိုင်သည်။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာတွေ ရှိနိုင်ပါသည်။
သို့သော် သင်သည် ထိုအဖြစ်များကို မည်ကဲ့သို့ဖြစ် ရသနည်း။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသနည်း ဆိုသော အချက်များကို သင်စဉ်းစား ချင်မှ စဉ်စားမည်။ ဂရုတစ်စိုက် တွေးတောခြင်မှ တွေးတော ပါလိမ့်မည်။ တွင်းဆိုသည်မှာ တွင်းတစ်တွင်းသာ ဖြစ်ပြီး သင်သည် ထိုအထဲတွင် ကြာရှည်စွာ နေထိုင်ရ မည်ဆိုပါက ထိုနေရာတွင် သင်သည် သေဆုံးသွားနိုင်ပါသည်။
သင်၏ အိပ်မက် ရူပါရုံများသည် ထိုတွင်းထဲတွင် သေသွားနိုင်ပါသည်။ သင်၏ အမှုတော် လုပ်ငန်းများသည် ထိုတွင်းထဲတွင် သေသွားနိုင်ပါသည်။ သင်၏ အိမ်ထောင်ရေး၊ သင်၏ ပညာရေး၊ သင်၏ စီးပွားရေး အားလုံးသည် ထိုတွင်ထဲတွင် ဆုံးပါးသွားနိုင် ပါသည်။
ယောသပ်ကို ကယ်ဆယ်ရန် ရုဗင် ဟုခေါ်သော ယောသပ်၏ အကိုကြီးက ကယ်တင်ရန် တာဝန် ဝတ္တရားတွေ ရှိနေပါသည်။ ရုဗင် သည် ညီအကိုများကို အကြံပြု ပြောကြားခဲ့သည်မှာ ညီဖြစ်သူ ယောသပ်ကို တွင်းထဲတွင် ချပစ်ရန် ဖြစ်သည်။ ရုဗင်၏ အကြံ အစည်မှာ ထိုသို့ တွင်းထဲချပြီးနောက် တစ်ဖန် လာရောက်ပြီး ကယ်နှုတ်ရန် စဉ်းစားထားပါသည်။ ထိုသို့ အကြံပြု ပြောကြား ခဲ့ပြီးနောက် ယောသပ်ကို တွင်းထဲသို့ ချလိုက်ကြပါသည်။
အမှန်တကယ် ရုဗင် ရောက်ရှိလာပြီး ယောသပ်ကို ကယ်မည်ပြုသောအခါ ရုဗင်သည် အလွန် အံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါသည်။ တုန်လှုပ် သွားခဲ့ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် တွင်းထဲသို့ ရုဗင်ချခဲ့စဉ်က ယောသပ်သည် ရုန်းကန်လျက်၊ တောင်းပန်လျက်၊ အော်ဟစ် လျက် တွင်းထဲတွင် ချထားခဲ့ပါသည်။ ယခု တစ်ဖန် ပြန်သွားခဲ့လျှင် ယောသပ်၏ တောင်းပန် ငိုယိုနေသံ၊ အော်ဟစ်နေသံ၊ ငိုကြွေးနေ သံတုိ့ကို ရုဗင် ကြားရ လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်နေခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ရုဗင် အမှန် တကယ်ရောက် သွားချိန်တွင် ထိုနေရာ၌ ယောသပ် ရှိမနေတော့ပါ။
မည်ကဲ့သို့သော တွင်းမျိုးတွင် သင်ရောက်နေပါသနည်း။
အချို့သော သူများသည် သင့်ကို တွင်းထဲတွင် ကျရောက်နေ ခဲ့သည့် အချိန်များကို မြင်တွေ့ ခဲ့ဘူးပါ လိမ့်မည်။ ထိုအထဲမှ အချို့သော သူများသည် သင့်ကို ကယ်နှုတ် ကူညီရန် ရည်ရွယ်ချက် ရှိကောင်း ရှိပါလိမ့်မည်။ သင်တွင်းထဲကျနေချိန်က သင်၏ အော်ဟစ်သံ၊ ငိုယိုသံ၊ တောင်းပန် အော်ဟစ်သံများကို သူတို့ ကြားသိ ခဲ့ကောင်း ကြားသိခဲ့ကြပါလိမ့်မည်။ သို့သော် နောက်ဆုံး တွင် သင့်ထံ ရောက်ရှိလာသောအခါ သင်သည် သူတို့ မျှော်လင့်နေ သလို သူတို့ မြင်တွေ့ခဲ့သလို သင်က တွင်းထဲမှာ ရှိမနေတော့ ဘဲ လွတ်မြောက်နေသည်ကို သူတို့ တွေ့သွားပါလိမ်မည်။
သင်သည် မည်သည့် တွင်းထဲမှာ ကျရောက်နေသည်ကိုတော့ ကျွန်တော်တုိ့ မသိပါ။ သင်သာလျှင် အသိဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အချို့သောသူများကတော့ အကြွေးတွင်းထဲမှာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အချို့သူများက မကျန်မာ၊ ဖျားနာခြင်းတွင်းထဲမှာ
အချို့သူများက ဖိစီးမှု တွင်းထဲမှာ
အချို့သူများက မျှော်လင့်ခြင်း ပျက်သုန်းသွားသည့် တွင်းထဲမှာ
အချို့သူများက အိပ်ထောင်ရေး ပြဿနာ တွင်းထဲမှာ ကျရောက်နေ ကြပါသည်။ ထိုတွင်းများသည် နက်သထက် နက်လာပြီး မှောင်မိုက်နေသော အခြေအနေမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အမှန်တကယ်တွင် ထိုတွင်းသည် ဝိညာဉ်ရေးကို ပြုပြင်ပေးမည့် တွင်းကြီးသာ ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ပျက်စရာ၊ ခြောက်သွေ့ ဝမ်းနည်း စရာ ဟု ဘယ်သော အခါမျှ မထင်ပါနှင့်။
သင်သည် တွင်းထဲတွင် အစဉ်နေရမည်မဟုတ်
သင်ကျရောက် နေသော တွင်း၏ အမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား၊ အတိမ်အနက်ကို ကျွန်တော်တို့ မသိပါ။ သင့်အတွက် ထိုတွင်းသည် မည်သို့ ဖြစ်သည်ကို ကျွန်တော်တို့ မသိပါ။ သို့သော် သင်၏ အိမ်နီးချင်း နှင့် သင်၏ သူငယ်ချင်းများကို ထိုတွင်းထဲတွင် သင်ရှိနေခဲ့သည့် အချိန်များ အကြောင်းကို သက်သေခံလိုက်ပါ။
ီညဦးယံ၌ ငိုကြွေးခြင်းသည် လာ၍ တည်းခို၏။ နံနက်ယံ၌ကား သီချင်းဆိုသော အခွင့်ရှိ၏။ (ဆာလံ ၃၀း၅)
ရုဗင်သည် ယောသပ်ရှိနေခဲ့သော ထိုနေရာသို့ တစ်ဖန် ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုနေရာတွင် ယောသပ်မရှိတော့ပါ။
ယောသပ်သည် မကြာခင်က ထိုတွင်ထဲတွင် ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုတွင်း ထဲမှာပင် သေတော့မည်ဟု တွေးနေခဲ့သည်။ ထိုနေရာမှာ သေတော့မည်ဟု ခံစားခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုတော့ ထိုသို့ မဟုတ်တော့ပါ။ သူသည် တွင်းထဲမှာ မသေတော့ပါ။ ထိုကြောင့် သူ၏ အိပ်မက်များ၊ မျှော်လင့်ချက်များ၊ ယုံကြည်ခြင်းများ၊ ဆက်လက် ရှင်သန်နေပါသည်။
သင်၏ အသက်တာတွင်လည်း သင်သည် တွင်းထဲမှာ သေသွားမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင့်အိပ်မက်တွေ၊ သင့်ယုံကြည် ခြင်းတွေ၊ သင့်မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ဆက်လက် ရှင်သန်နေဦး မည်ဟု သင်တွေးထားပါ။
ဘုရားသခင်သည် ယောသပ်နှင့် အတူ ရှိနေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ယောသပ်၏ အသက်တာကို အသုံးပြုလိုပါသေးသည်။ လုပ်ဆောင်စရာ အများအပြား ရှိနေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ယောသပ်အားဖြင့် ကြီးမားသော အမှုကြီးကို ပြုပါဦးမည်။
သင့်အသက်တာ ကိုလည်း ဘုရားသခင်သည် အစဉ်အမြဲ ရှိနေမည်ကို ဘယ်သောအခါမျှ မမေ့ပါနှင့်။ မည်မျှပင် ခက်ခဲ နက်နဲသော တွင်းကြီး ထဲတွင် ကျရောက်နေသည် ဖြစ်ပါစေ၊ ဘုရားသခင်သည် ကြီးမားသော သူ၏ အမှုတော် လုပ်ငန်းကြီး အတွက် သင့်အသက်တာကို အသုံးပြုဦးမည်ဆိုသည့် အချက်ကို အစဉ် နှလုံးသွင်းစေချင်ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာ အစမှ အဆုံးအထိ ဖတ်ကြည့်လျှင် ယောသပ် အသက်တာတွင် သာမက ယောဘ၊၊ ဒံယေလ ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အဗေဒနေဂေါ၊ ယောန မှစ၍ ယေရှု အထိ သူတို့၏ အသက်တာများကို ကြည့်ရှုပါက ဘုရားသခင် အတူပါရှိ အောင်ပွဲခံခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
သင်တို့တွင် အချို့သောသူတို့သည် ပြဿနာ လုပ်သောသူများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အချို့သော သူများက သူခိုး၊ အချို့သူများက အရက်သမား၊ အချိုကသူများက ဖောက်ပြန်သောသူ၊ အချို့သောသူများက မူးယစ်ဆေးဝါးသများ အစရှိသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသူများသည် လူဟောင်း များသာ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော် မမွေးဖွားမီက (Before Christ) အခြေအနေ ဖြစ်သည်။
သို့သော် ၂ကော ၅း၁၇ တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ
လူ မည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ ရှိလျှင် အသစ် ပြုပြင်သော သတ္တဝါဖြစ်၏။ ဟောင်းသော အရာတို့သည် ပြောင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းသော အရာတို့သည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ (၂ကော ၅း၁၇)
ယခု ကျွန်တော်ဖော်ပြမည့် အရာသည် ဘုရားသခင်က ယောသပ်အတွက် အရာရာကို အသစ်ဖြစ်စေခဲ့သည် ဆိုသည့် အကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ်ကပင် တွင်းထဲတွင် ရှိနေခဲ့သည်။ မှောင်မိုက်တွင် ရှိနေခဲ့သည်။ တစ်မိနစ်အတွင်း ချုပ်ငြိမ်းတော့မည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ရုတ်တရတ် အခြေအနေများက ပြောင်းလဲသွားလေတော့သည်။ ရုတ်တရုတ် မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်တွေ ပေါ်ထွန်း လာသည်။ ယခုအခါ အရာ ခပ်သိမ်းသည် ပြောင်းလဲရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီး၊ မကြာခင် အသစ်ဖြစ်လာပေတော့မည်။
သင့်ရဲ့ အသက်တာထဲမှာ အသစ်ဖြစ်လာဘို့ ဘုရားသခင် လုပ်ဆောင်နိုင် ပါသည်။ သင်၏ အသက်တာ ထဲက အရာခပ်သိမ်းကို ပြောင်းလဲ သွားပေတော့မည်။
ပေတရုသည် တစ်ညလုံး ငါးဖမ်းခဲ့သော်လည်း တစ်ကောင်မျှမရခဲ့ချေ။ သို့သော် ရုတ်တရတ် နာခံလိုက်သောအခါ မမျှော်လင့် သော ပြောင်းလဲမှုများ ခံစားခဲ့ရသည်။ ပိုက်ကွန် စုတ်ပြတ်မတတ် ငါးများကို ဖမ်းမိခဲ့ပြီး လှေနစ်လုမတတ် ငါးများ ရရှိခဲ့သည်။ ဘာမျှ မရှိခြင်းမှ ပြည့်ဝခြင်းသို့လည်းကောင်း၊ ငိုကြွေးခြင်းမှ ဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့လည်းကောင်း၊ ရှုံးနိမ့်ခြင်းမှ အောင်မြင်ခြင်းသို့ အောင်မြင် ကူးမြောက်လာခဲ့ကြသည်။
ယောသပ်၏ အသက်တာတွင် ကာယပိုင်းနှင့် ဝိညာဉ်ပိုင်းကို နှစ်ပိုင်းစလုံးတွင် ဘုရားသခင်က လိုက်လျောညီထွေစွာ လှုပ်ရှား လုပ်ဆောင် နေခဲ့ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ သိမြင်နိုင်ပါသည်။
ယောသပ်ကို တွင်းထဲက နှုတ်ယူခဲ့သော ယုဒ
ငါတို့သည် ညီအကိုကို သတ်၍ သေကြောင်းကို ဖွက်ထားလျှင် အဘယ်ကျေးဇူး ရှိသနည်း။ ကိုင်ကြ။ ကိုယ်တိုင် မညှင်းဆဲဘဲ ဣရှမေလ လူတို့အား ရောင်းလိုက်ကြစို့။ (ကမ္ဘာ ၃၇း၂၆-၂၇)
ယောသပ်တွင် ရှိသော ကုတ်အင်္ကျီ လှလှလေးက ကယ်တင်ခဲ့သည်မဟုတ်။ သူခံစားရသော ဘိဿိတ်က ကယ်နှုတ်ခဲ့သည် မဟုတ်။ သူမက်ခဲ့သော အိပ်မက်များက ကယ်နှုတ်ခဲ့သည်မဟုတ်။
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်အရာ ယောသပ်ကို တွင်းထဲက နှုတ်ယူခဲ့သည်မှာ ယုဒဖြစ်သည်။ ယုဒ၏ အဓိပ္ပါယ်မှ ချီးမွမ်းခြင်း “PRAISE” ဖြစ်သည်။
ရုဗင်က တွင်းထဲသို့ ချရန် ပြောခဲ့သည်။
သို့သော် ယုဒက ပြန်နှုတ်ရန် ပြောခဲ့သည်။
သင်တွင်းထဲသို့ မည်ကဲ့သို့ ရောက်နေသည်ကို ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါ။ ဘာကြောင့် ရောက်ရသည်ကိုလည်း သင့်ကို မေးမြန်ပြီး အပြစ်မတင်လိုပါ။ သို့သော် ကျွန်တော် ပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့ သင့်ကို ယုဒက ကယ်တင်ပါလိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင် ကျွန်တော် ရည်ညွှန်းတင်ပြလိုသော အကြောင်းအရာမှာ “ချီးမွမ်းခြင်း” ဟု အနက် အဓိပ္ပါယ် ရှိသည့် ယုဒ က ယောသပ်ကို ကယ်နှုတ်လိုက်သည် ဟူသည့် အချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယောသပ်ကို ချီးမွမ်းခြင်းက ကယ်နှုတ်လိုက်ပါသည်။
ယနေ့ အချိန်တွင် ချီးမွမ်းသည် ဆိုရာ၌ စာမေးပွဲအောင်၍ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းသည်။ လုပ်ငန်း အဆင်ပြေ၍ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းသည်။ တိုးတတ်မှု ရရှိခံစားသောကြောင့် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းသည်။ ပျောက်သော ပိုက်ဆံ ပြန်ရ၍ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းသည် ဟူသော အချက်များကို သိမြင်ကြားတွေ့ရပါသည်။ သို့သော် ယခု ယောသပ်သည် ကျဆုံးခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ အားငယ်ခြင်းတို့တွင် မည်ကဲ့သို့ ချီးမွမ်းနိုင်ပါမည်နည်း။ အကယ်၍ ချီးမွမ်းခဲ့သည် ဆိုလျှင်လည်း ကြေကွဲမှု များကို ခံစားပြီး ချီးမွမ်းသော ချီးမွမ်းခြင်းသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထိုအခြေအနေကို ကြေကွဲနေသော ချီးမွမ်းခြင်းဟု ခေါင်းစဉ် တပ်လိုပါသည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်အရ သင့်ကို ဘုရားသခင် ပြောနေသည်မှာ မည်သူမဆို ဆိုးရွားမှုများနှင့် ရင်ဆိုင် ရသည်ဆိုပါက အော်ဟစ်ချီးမွမ်း လိုက်ပါ။ သင်၏ ကျန်မာရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကောင်းသတင်းတွေ ဆရာဝန်က မပြောခဲ့လျှင် ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ သင့်ပစ္စည်းတွေ ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့တယ်ဆိုရင် အော်ဟစ် ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ သင့်မှာ ကြီးမားသော ပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်နေရ တယ်ဆိုရင် အော်ဟစ်၍ အကြီးအကျယ် ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ “ကျွန်တော့်မှာ ဘာပြဿနာတွေ ရှိရှိ ကိုယ်တော်ကို အစဉ် ကောင်းကြီးပေးပါမည်။ ကိုယ်တော်ရဲ့ နာမတော်ကို အစဉ် မြွတ်ဆိုပါမည်” ဟု သင့်၏ နှုတ်မှ အော်ဟစ်ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။
သင့်အခြေအနေဟာ ဘယ်လောက်ဘဲ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာကြီး တွေကို ရင်ဆိုင်နေရသည် ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းခြင်း တွေ နဲ့ ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ။
အဘိဓါန်တွင် Broken ဆိုသည်မှာ ကျိုးနေသော၊ ပျက်စီးနေသော၊ တစ်ဆက်တည်းမဟုတ်သော၊ ပျက်ပြားသွားသော၊ ပူဆွေး သောက ရောက်နေသော၊ အသဲကွဲနေသော၊ အစရှိသည့် အဓိပ္ပါယ်များ ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ပြဿနာ ရှိနေချိန်များတွင် ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် ချီးမွမ်းသောသူ မည်မျှရှိပါသနည်း။ အမှန်တကယ် ချီးမွမ်းသော သူများသည် အော်ဟစ်နေကြသည်။ ဣနြေ္ဒ သိက္ခာမဲ့ဖြစ်နေကြသည်။ ထိုသူတို့သည် ရှုပ်ပွ ပေရေနေကြသည်။ သူတို့သည် မိမိတို့၏ ဆံပင်ကိုပင် မကြည့်နိုင်ကြ။ သူတို့သည် မိတ်ကပ် မလူးနိုင်ကြ။ ထိုသူတို့သည် တစ်ခါတစ်ရံ ရွံစရာပင် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့ ချီးမွမ်းခြင်းကို သင့်ထံမှ ယူဆောင်လိုပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့၏ ညည်းတွားခြင်းနှင့် မျက်ရည်များမှ တစ်ဆင့် ထိုကဲ့သို့ ချီးမွမ်းခြင်းကို မျှော်လင့်နေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်၏ ကြေကွဲသော နှလုံးသားမှ ချီးမွမ်းသံကို မျှော်လင့်နေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်၏ ကျယ်လောင်သော အသံဖြင့် အော်ဟစ်ချီးမွမ်းခြင်းကို လိုချင်နေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်၏ ရူးသွပ်စွာ ချီးမွမ်းခြင်းကို မျှော်လင့်နေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်၏ ခံစားချက် ကင်းမဲ့လျက် ရှိနေချိန်တွင် ချီးမွမ်းသံကို ကြားနာချင်ပါသည်။
သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ထိုအခြေအနေ ဆိုးထဲတွင် ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် သင်၏ ကြေကွဲနေသော ချီးမွမ်းခြင်းများ (broken praise) ကို မျှော်လင့်နေပါသည်။
ယောဘသည် အရာခပ်သိမ်းကို ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့ ဆုံးရှုံး သွားပြီးနောက်တွင် သူ၏ နှလုံးသားများသည် တစ်စစီ ကြေကွဲသွားခဲ့သည်။ တွေ့ကြုံရသော အဖြစ်ဆိုးကို ကြံ့ကြံ့ခံကာ ရင်ဆိုင်ခိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယောဘကျမ်းကို ဖတ်ကြည့်သော အခါ ထိုကျမ်းထဲတွင် ယောဘ၏ ချီးမွမ်းခြင်းသည် ကြေကွဲမှု အပြည့်ဖြင့် ချီးမွမ်းအော်ဟစ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရလေသည်။
“ထိုအခါ ယောဘသည် ထ၍ မိမိဝတ်လုံကို ဆုတ်လေ၏။ ဆံပင်ကိုလည်း ရိတ်၍ မြေပေါ်မှာ ဝပ်လျက် ကိုးကွယ်ပြီးလျှင်၊ ငါသည် အဝတ်မပါဘဲ အမိဝမ်းထဲက ထွက်လာ၏။ အဝတ်မပါဘဲ အမိဝမ်းထဲသို့ ပြန်သွားရတော့မည်။ ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားလည်း ရုတ်သိမ်းတော်မူ၏။ ထာဝရ ဘုရား၏ နာမတော်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။” (ယောဘ ၁း၂၀)
ထိုအခြေ အနေသည် ကောင်းမွန်သော အခြေအနေ မဟုတ်ပါ။ မျက်ရည်များနှင့် ကိုးကွယ်နေ ရပါသည်။ နှလုံးသားတွေ ကြေကွဲနေပါသည်။ ညည်းတွားနေရပါသည်။ နှလုံးသားတွေ နာကျင်နေပါသည်။ အသက်တာထဲတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ ခံစားနေ ရပါသည်။ သို့သော် သူသည် ဘုရားသခင်ကို ကြေကွဲနေသော ချီးမွမ်းခြင်းများဖြင့် ချီးမွမ်းခဲ့သောအခါ လှပသော အနာဂတ်ကို ပြန်လည် ရရှိလာခဲ့ပါသည်။ ယောဘ၏ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည် သူ၏ ကံကြမ္မာကို ပြန်လည်မြင့်တတ် လာစေပြီး နောက်ဆုံး တွင် ဘုရားသခင်က သူ့ကို ပို၍ ကြီးမားသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြင့် သွန်းလောင်ခဲ့ပါသည်။ မူလရှိခဲ့သော ကောင်းကြီး မင်္ဂလာထက် နှစ်ဆပို များသော ကောင်းကြီးများကို ရရှိခံစားစေခဲ့ပါသည်။
ချီးမွမ်းခြင်းသည် ချပ်ဝတ်တန်ဆာ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဒုက္ခပြဿနာ ရှိလာတိုင်း ထိုချပ်ဝတ် တံဆာကိုသာ ရွေးချယ်ပါမည်။
သင့်ကို တွင်းထဲသို့ ကျရောက်စေသော ပြဿနာ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်၏ ချီးမွမ်းခြင်းများကို ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်သွားစေရန် ဖြစ်သည်။ နတ်ဆိုးများသည် ကျွန်တော်တို့၏ ချီးမွမ်ခြင်း အသံကိုများကို မုန်းတီးကြပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ လူများတွင် ယောသပ် တစ်ဦးတည်းသာ တွင်းထဲသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်မဟုတ်။
ဆာလံ ၄၀း၂ တွင် ဒါဝိတ်က ဖော်ပြထားသည်မှာ
“ပျက်စီးရာတွင်းနှင့် အလွန်ဆိုသော ရွံ့ထဲက ငါ့ကို ဆယ်နှုတ်ပြီးလျှင် ငါ့ခြေတို့ကို ကျောက်ပေါ်မှာ တင်၍ ငါခြေရာတို့ကို တည်စေတော်မူ၏။” (ဆာလံ ၄၂း၂)
ဟု ရေးသားခဲ့သောကြောင့် ဒါဝိတ် ကိုယ်တိုင်လည်း တွင်းထဲကျသည့် အခြေအနေမျိုး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ ဘူးသည် ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ပရောဖတ် ယေရမိ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြောက်စရာကောင်းသော တွင်းထဲတွင် ကျရောက်ဘူးသည်။
ဧဗဒမေလက်သည်လည်း လူတို့ကို ခေါ်၍ နန်းတော်အတွင်း ဘဏ္ဌာတိုက် အောက်သို့ ဝင်ပြီးလျှင် ဟောင်းနွမ်းသော အဝတ်စုတ်များကို ယူပြီးမှ ယေရမိ ရှိရာမြေတွင်း၌ ကြိုးနှင့် လျှော့ချလေ၏။ (ယေရမိ ၃၈း၁၁)
တမန်တော် ဝတ္ထုတွင် ရှင်ပေါလုနှင့် သိလတို့ နှစ်ဦးသည်လည်း ထောင်ထဲမှ လွတ်မြာက်စေရန် ကြေကွဲစွာဖြင့် အော်ဟစ်ချီးမွမ်းခဲ့ရကြောင်း ကျမ်စာတွင် ဖတ်ရလေသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ကောင်းသော ချီးမွမ်းခြင်း များကိုသာ ပြုလုပ်လိုကြသည်။ ထိုအရာ လုပ်ဆောင်နိုင်ဘို့သာ ကြိုးစားအားထုပ်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က သင်တို့ထံက ကြေကွဲနေသော ချီးမွမ်းခြင်းများကိုသာ ကြားလိုပါသည်။
ဘုရားသခင်ကို ကြေကွဲသော ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် ချီးမွမ်းပါ။ ထိုအရာသည် အခြားသူ တစ်ဦးအတွက် အမြင်ဆိုးကောင်း ဆိုးနေပါလိမ့်မည်။ ကြားရသည့် အသံက သာယာချင်မှ သာယာပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ နားတော်ထဲတွင် ကောင်းကင်တမန်တို့၏ ကြည်လင်ချိုမြ သာယာလှသည့် စောင်းသံကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။
ယာသပ်၏ အကိုတို့သည် ယောသပ်ကို သေစေရန် ရည်ရွယ်လျက် မျှော်လင့်ချက် မရှိနိုင်သည် တွင်းထဲသို့ ချပစ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် မိမိကို မချစ်မနှစ်သက်သော အကိုဖြစ်သူ ယုဒကပင် တွင်းထဲက ကယ်ထုပ်လိုက်ပြန်သည်။
ယရမိကို သေစေရန် ရည်ရွယ်လျက် မျှော်လင့်ချက် လုံးဝမရှိသည့် တွင်းထဲသို့ ချပစ်လိုက်ကြသည်။ သို့သော် ဟောင်းနွမ်း မလှပသော လက်နှီးစုတ် ကို ကြိုးလုပ်၍ ယေရမိကို ကယ်ထုပ်လိုက်ပြန်သည်။
ပေါလုနှင့် သိလတို့သည် ထောင်ထဲတွင် ကျရောက်နေသောအခါ အရိုက်ခံရသည်။ အဆူခံရသည်။ အရှက်ရစေသည်။ သို့သော် သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ထိုအခြေအနေထဲတွင် ကြေကွဲစွာဖြင့် အော်ဟစ် ချီးမွမ်းလိုက်သည်။ ထိုအခါ ဘုရားသခင်သည် ထောင်နံရံတို့ကို လှုပ်ခါစေလျက် တံခါးတို့ကို ပွင့်ဟ စေလျက် အချုပ်အနှောင်မှ လွတ်မြောက်စေခဲ့သည်။
အချို့လူများက သင့်ကို တွင်းထဲမှာ သေဆုံးသွားဘို့ မျှော်လင့်စောင့်စားနေကြပါသည်။ သို့သော် သင်၏ ချီးမွမ်ခြင်းကြောင့် ထိုသူတို့မှာ စိတ်ပျက်ခြင်းကိုသာ ခံစားသွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုတွင်းကြီးသည် သင့်ကို ဘိဿိတ် သွန်းလောင်ရာ နေရာ ဖြစ်ကြောင်း ထိုသူတို့ကို သိစေပါ။
ယောသပ်ဟာ တွင်းထဲမှာ ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ တွင်းထဲမှာ ဘာမျှ မရှိသော်လည်း ချီးမွမ်းခြင်းများဖြင့် ဖြည့်ပေးလိုက်သည်။ ကျွန်တော်တို့က ထိုတွင်းကို ကျွန်တော်တို့၏ ညစ်ညူးခြင်းများဖြင့် ဖြည့်လိုက်သည် ဆိုပါက ထိုနေရာသည် သင်းချိုင်း အုပ်ဂူတစ်ခုအလား ဖြစ်သွားသွားနိုင်ပါသည်။
သို့သော် ချီးမွမ်းခြင်း ဖြည့်ပေလိုက်သောအခါ ကျွန်တော်တို့ကို ထိုတွင်းထဲမှ လွတ်မြောက်စေခဲ့ပါသည်။
သင့်၏ လွတ်မြောက်ရာလမ်းအတွက် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။
သင်၏ လွတ်မြောက်ရာလမ်းအတွက် ဘုရားသခင်ကို အော်ဟစ်လိုက်ပါ။
သင်၏ လွတ်မြောက်ရာလမ်းအတွက် ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ကခုန်လိုက်ပါ။
သင်၏ လွတ်မြောက်ရာလမ်းအတွက် ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ပြေးလွှားနေလိုက်ပါ။
သင်၏ တွင်းကို ချီးမွမ်းခြင်းများဖြင့် ပြည့်ဝစေပါ။ သင်၏ ချီးမွမ်းခြင်းဟာ ယောနကို ငါးကြီးက ထွေးထုပ်လိုက်သလို မှောင်မိုက်က လွတ်မြောက်လာစေမှာပါ။
အဲဒီလို ယောန လွတ်မြောက်လာဘို့ ငါးကြီးဝမ်းထဲမှာ ဘုရားသခင်ကို အော်ဟစ်ခဲ့ရသည်ကိုတော့ လစ်လျူရှု၍ မရနိုင်ပါ။ ယောနသည် ဘုရားသခင်ကို ကြေကွဲစွာ အော်ဟစ်ခဲ့ရပါသည်။ သို့သော် လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါသည်။
သင့်ရဲ့ အခြေအနေဆိုးရွားလှတဲ့ တွင်းထဲကနေ လွတ်မြောက်ဘို့ ကြေကွဲစွာဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ယခုပင် အော်ဟစ်လိုက်ပါ။ ကြေကွဲစွာဖြင့် ယခုပင် ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ သင့်ကို ထူးခြားသော အသက်တာကို ခံစားရစေမှာ သေချာပါသည်။
ယခုပင် အော်ဟစ် ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ ကြေကွဲစွာ အော်ဟစ် ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဝိညာဉ်ရေး နိုးထမှု အကြောင်း
Posted by ဦးမင်းလွင် on 05/03/2013
Posted in: Video.	Tagged: ႏိုးထမႈ.	Leaveacomment
ကိုရီးယား နိုင်ငံရဲ့ ဝိညာဉ်ရေးဟာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောရင် ရနိုင်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေဟာ နနက် (၄)နာရီ (၅) နာရီလောက် ဆိုရင် ဘုရားကျောင်းတွေမှာ သွားရောက် ဆုတောင်းကြတယ်။ အသင်းတော်တွေ ဟာဆိုရင်လည်း အားရစရာ အလွန်ကောင်း ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကို သာသနာပြုတွေ စေလွတ်ထားပြီး ထောက်ပံ့ ကူညီမှုတွေ အများအပြား လည်း ပြုလုပ်နေ တာကို မြင်တွေ့နိုင် မှာပါ။
အဲဒီလို ဖြစ်လာဘို့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်လောက်က အမျိုးသမီး (၂)ယောက်ဟာ အတူတကွ ဆုတောင်းရာ ကနေ အစပြုခဲ့ပြီးနောက် အခြားသူတွေလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်လာကာ နောက်ဆုံးမှာတော့ အလွန်ကြီးမား တဲ့ နိုးထမှုကြီး ဖြစ်လာ ပါတော့တယ်။
အဲဒီအကြောင်းအရာကို “ဟုတ်မှန်သော အလင်း” ကဘာသာပြန်ပေးထားပြီး မြန်မာအသံသွင်းထားတဲ့ မှတ်တမ်းတို ဗွီဒီယို အပိုင်းလေးကို ကြည့်ရှုပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်လည်း ဆက်လက် ဆုတောင်းပေးကြဘို့ တိုက်တွန်း နိုးဆော်အပ်ပါတယ်။
ချစ်ခြင်း မေတ္တာ၏ သဘောသဘာဝ
Posted by ဦးမင်းလွင် on 03/03/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ခ်စ္ျခင္း, ေမတၱာ.	Leaveacomment
၁ကော ၁၃း၎-၈ ကို ဖတ်ပါ။
မေတ္တာသည် စိတ်ရှည် တတ်၏။ ကျေးဇူးပြု တတ်၏။ မေတ္တာသည် ဂုဏ်ပြိုင် ခြင်းမရှိ။ မာန်မာန မရှိ။ မလျောက်ပတ်စွာ မကျင့်တတ်၊ ကိုယ်ကျိုးကို မရှာတတ်။ ဒေါသ အမျက် မထွက်တတ်၊ အပြစ် ရှိသည် ဟု မထင်တတ်၊ မတရားသော အမှု၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်း မရှိတတ်၊ သမ္မာတရား၌ ဝမ်းမြောက်တတ်၏။ ခပ်သိမ်းသော အရာကို ဖုံးအုပ် တတ်၏။ ခပ်သိမ်းသော အရာကို ယုံတတ်၏။ ခပ်သိမ်းသော အရာကို မျှော်လင့် တတ်၏။ ခပ်သိမ်းသော အရာကို သီးခံ (ကြံ့ကြံ့ခံ) တတ် ၏။ မေတ္တာသည် ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘောနှင့် အစဉ် ကင်းလွတ်၏။ (၁ကော ၁၃း၎-၈)
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ရေးသားကြသော လူသားတို့၏ ခံစားချက် မြောက်များစွာကို ဖတ်ရှုဘူးပါသည်။ ထိုအကြောင်း အရာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး နားလည်းမှုလွဲမှားခြင်း၊ သစ္စာဖောက်ခံရခြင်း စသည့် အကြောင်း အရာပေါင်း များစွာကိုသာ ကြားသိခဲ့ရ ပါသည်။ သို့သော် ၁ကော (အခန်းကြီး ၁၃) တွင် ခရစ်ယာန်တို့ခံစားသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ရုပ်လုံးဖော်ကာ ရေးသားထားသော အချက်အလက်များကို ဖတ်ရှုလေ့လာခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ ထိုအရာများကို တမန်တော်ကြီး ရှင်ပေါလုက ရေးသားပြီး ၁ကော ၁၃း၁-၈ တွင် လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြသော နှုတ်ခပတ်တော်ကို တစ်ချက်စီ ချရေးလိုက်သော် အောက်ပါအတိုင်း ကျမ်းစာက ဖော်ပြထားပါသည်။
၁။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် မနာလို ဝန်တို မဖြစ်တတ်။
၂။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဝါကြွားခြင်း မရှိ။
၃။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် မာန်မာန မရှိတတ်။
၄။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် မလျောက်ပတ်စွာ မကျင့်တတ်။
၅။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကိုယ်ကျိုးမရှာတတ်။
၆။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဒေါသအမျက် မထွက်တတ်။
၇။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အပြစ်ရှိသည်ဟု မထင်တတ်။
၈။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် မတရားအမှု၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်း မရှိတတ်။
ချစ်ခြင်း မေတ္တာက ပြုလုပ်ပေးသောအရာ
၉။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် စိတ်ရှည်တတ်၏။
၁၀။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကျေးဇူးပြုတတ်၏။
၁၁။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် သမ္မာတရား၌ ဝမ်းမြောက်တတ်၏။
၁၂။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခပ်သိမ်းသောအရာကို ဖုံးအုပ်တတ်၏။
၁၃။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခပ်သိမ်းသောအရာကို ယုံတတ်၏။
၁၄။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခပ်သိမ်းသောအရာကို မျှော်လင့်တတ်၏။
၁၅။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခပ်သိမ်းသောအရာကို ကြံ့ကြံ့ခံတတ်၏။
၁၆။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘောနှင့် အစဉ်ကင်းလွတ်၏။
အထက်ပါ ဖော်ပြပါ ခရစ်ယာန်တို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် “Agape” မြန်မာ ဘာသာပြန်သော ခရစ်ယာန် စာပေများတွင် “အဂါပေ မေတ္တာ” ဟု ဘာသာပြန် ဖော်ပြကြပါသည်။ ထိုမေတ္တာသည် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော စိန်တုံးသဖွယ် မျက်နှာပြင်ပေါင်း မြောက်များစွာ ပါသည့် ရတနာ ဥစ္စာ တစ်ခုနှင့် သဘောတူညီနေပါသည်။ ထိုမေတ္တာ၏ အနှစ်သာရများကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် အပြည့်အဝ ခံစားခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သူတစ်ပါး ကိုလည်း ပေးဝေမျှ နိုင်သော သူများ အဖြစ် အသက်ရှင်နိုင်ရန် စုစည်း ဖော်ပြ ရေးသား လိုက်ပါသည်။